ပြည်တွေပေးရမဲ့ အကြွေး ၂၆.၈၄ ဘီလျံဒေါ်လာ ကျော် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များပိုင် ဦးပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၆၀ ကျော်ရှိနေပါပြီ ။------------------------------ From ..> Clean TextUnion of Myanmar Economic Holdings Limited operates as an industrialconglomerate that engages gem production and marketing, garmentfactories, wood industries, goods and beverages and other tradingcompanies, supermarket, banking, hotels, tourism, transportation,construction and real estate, computers, telecommunications,electronics and equipment, and steel and cement industries. Thecompany is based in Yangon, Myanmar.Address:189-191 Maha Bandoola RoadBotahtaung TownshipYangon,Myanmarရာနှုန်းပြည့် ထောက်ပံ့ထားတဲ့ လုပ်ငန်းများ (၁၆)မျိုး(က) ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ (၉)မျိုး၁။ မြန်မာရူဘီအင်တာပရိုက်စ် (Myanmar Ruby Enterprise)၂။ မြန်မာအင်ပီးရီးရယ်ဂျိတ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Myanmar Imperial Jade Co.,Ltd.)၃။ မြန်မာရာဘာဝုဒ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Myanmar Rubber Wood Co., Ltd.)၄။ မြန်မာနာနတ်ရည်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၅။ မြဝတီရေခဲစက်လုပ်ငန်း၆။ မြဝတီသောက်ရေသန့် လုပ်ငန်း (Myawaddy Purified Drinking Water)၇။ ဆင်မင်း(၁/၂)ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း(ကျောက်ဆည်) (Sinmin Cement Production)၈။ အပ်ချုပ်လုပ်ငန်း၉။ ရွှေပင်လယ်မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် (Shwe Pin Lel)(ခ) ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ(၁)မျိုး (Trading)၁။ မြဝတီထရေးဒင်းလီမိတက် (Myawadding Trading Limited.)(ဂ) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (၆)မျိုး (Service)၁။ မြဝတီဘဏ်လီမိတက် (Myawaddy Bank)၂။ ဗန္ဓုလသယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် (Bandoola Transportation Co., Ltd.)၃။ မြဝတီခရီးသွားလုပ်ငန်း (Myawaddy Travel and Tour)၄။ နဝဒေးဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းလီမိတက် (Nawaddy Hotel & Tourism)၅။ မြဝတီစိုက်ပျိုးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၆။ မြန်မာ့အားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း (Myanma Arr Construction)ဆင့်ပွားထောက်မ ပါဝင်ပူးပေါင်းမှု ပြုသော ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ (၂၁)မျိုး(Joint Venture)(က) ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ (၁၄)မျိုး (Production)၁။ မြန်မာဆေးဂဲလ် အင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက် (Myanmar Segye Int. Limited.)၂။ မြန်မာဒေဝူး အင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက် (Myanmar Daewoo Int. Limited.)၃။ မြန်မာယူနီမစ် အင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက် (Myanmar Unimix Int. Limited.)၄။ ရော့သ်မင်အော့ဖ်ပေါလ်ဖေါလ်မြန်မာ ပရိုက်ဗိတ်လီမိတက် (Paul MaulMyanmar Private Limited.)၅။ မြန်မာဘရူဝါရီ လီမိတက် (Myanmar Brewery Limited.)၆။ မြန်မာပေါ်စကိုစတီးလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Myanmar Posco Steel Co., Ltd.)၇။ မြန်မာနိုဗိုစတီးလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Myanmar Novo Steel Co., Ltd.)၈။ ဘာဂျာပိန့် မင့်နုဖက်ချားရင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်၉။ သည်ဖက်စ်အော်တိုမိုးတစ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (The Fast Automotive Co., Ltd.)၁ဝ။ အမ်ဂျီယူဘီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် (MGUB Co., Ltd.)၁၁။ မြန်မာနိုဗို ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Myanmar Novo Co., Ltd.)၁၂။ ရတနာကုဋေကုဋာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၁၃။ မြန်မာဂျိတ်အင်တာနေရှယ် လီမိတက် (Myanmar Jade Int. Limited.)၁၄။ မြန်မာဆီးမင့် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Myanmar Cement Co., Ltd.)ခ။ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ (၃)မျိုး (Trading)၁။ မြန်မာ့ရှေ့ ဆောင်ထောက်ပံ့ရေး လီမိတက်၂။ မြန်မာဖဲယားပရိုက် ပရိုက်ဗိတ်လီမိတက် (Myanmar Fair Price Private Limited.)၃။ ဘန့်ဟော့ဟင်မြန်မာ လီမိတက်ဂ။ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (၄)မျိုး (Service)၁။ စီးမင်း(စ်)လီမိတက်မြန်မာ (Siemens Limited Myanmar)၂။ မြန်မာလင်း(ဒ်)အင်(န်)ဒဲဗဲလော့မင့် လီမိတက် (Myanmar Land andDevelopment Limited)၃။ နေရှင်နယ်ဒီဗဲလုပ်မင့် ကော်ပိုရေးရှင်း (National Development Corporation.)၄။ ဟံသာဝတီဂေါက်ကွင်းနှင့်မြို့ တော်ကလပ်အသင်း လီမိတက် (Hanthawaddy GolfClub and City Golf Club Limited.)ရာနှုန်းပြည့် တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံခြားသား၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုသောလုပ်ငန်းများ (၁၁)မျိုး(က) ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ (၈)မျိုး (Manufacturing)၁။ မာကျူရီရေးမင်နှူဖက်ချာရင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် (Mercury Ray Manufacturing Co., Ltd.)၂။ ပန်ကာကြိုးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၃။ မြန်မာဟွာဖူးအင်တာနေရှင်နယ် လီမိတက်၎။ မြန်မာထရိုင်းယင့်အင်တာနေရှင်နယ် လီမိတက်၅။ မြန်မာမာမီးဒါဘယ်ဒက်ကာ လီမိတက်၆။ မြန်မာဆမ်ဂေါင်းအင်ဒက်စရီရယ် လီမိတက်၇။ မြန်မာတိုကီဝါ ကော်ပိုရေးရှင်း (Myanmar Tokiwa Corporation.)၈။ မြန်မာကုရိုဆာဝါထရပ်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Myanmar Kurosawa Trust Co., Ltd.)(ခ) ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ (၁)မျိုး (Trading)၁။ ဒိုင်းမွန်းဒရက်ဂွန်ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Diamond Dragon Co. Ltd.)(ဂ) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (၂)မျိုး (Service)၁။ မိုးကုတ်မိုတယ်လုပ်ငန်း (Mogoke Motel)၂။ မြန်မာဟိုတယ်နှင့်ခရုဆက်စ် လီမိတက် (Myanmar Hotel & Cruise Limited.)ထပ်မံ တိုးချဲ့လာသော လုပ်ငန်းများ၁။ အထည်ချုပ်စက်ရုံလုပ်ငန်းကို မလေးရှားမှ Comfort InternationalIncorporate (CII) နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်း၂။ ငပလီကမ်းခြေနှင့် ကမ်းသာယာကမ်းခြေတို့တွင် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများကိုကမ္ဘောဇ၊ ထူးမော်၊ အေးရှားဝေါလ်၊ ဝုဒ်လန်း၊ ယုဇန၊ထွန်းလင်းရောင်၊ ဆဲဗင်းဖိုးဆဲဗင်းကုမ္ပဏီတို့ နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်း၃။ဆပ်ပြာစက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်းကို မွန်ပြည်နယ်၊ပေါင်မြို့ နယ်မှာ တည်ဆောက်ခြင်း၎။မင်္ဂလာဒုံမြို့ နယ်၊ပျဉ်းမပင်မြေများကိုမြန်မာမာမီးဒါဘယ်ဒက်ကာလီမိတက်ကို ခေါက်ဆွဲခြောက်စက်ရုံလုပ်ရန်ငှားရမ်းခြင်း၅။ ဂရက်နိုိက်အလှဆင်ကျောက်ပြားစက်ရုံကို ကျိုက်ထိုမြို့ မှာတည်ဆောက်ခြင်း၆။ သူဌေးကျွန်းဟိုတယ်နဲ့ ကာဆီနိုလုပ်ငန်းကို ထိုင်းမှအက်ဒမန်ကလပ်လီမိတက်ဒ်နဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်းအခြားတွေ့ရှိသော လုပ်ငန်းများ1. မိုးကုတ် ကျောက်မျက်ရတနာ တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း2. မိုင်းရှူး ကျောက်မျက်ရတနာ တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်3း. နန်းယားဒေသ ကျောက်မျက် တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း4. ရွှေသတ္ထု တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း5. မော်ချီးဒေသ ခဲသတ္ထု တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်6း. ကျောက်စိမ်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း7. ကျောက်စိမ်း ကျောက်မျက်ရတနာ အချောထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း8. ဂရင်းနှိပ် ကျောက်ပြားစက်ရုံ (ကျောက်ဆည်)9. ပလပ်စတစ် ရက်ထည်အိပ်စက်ရုံ (ကျောက်ဆည်)10. မြန်မာပေါ်စကို စတီးလ် သွပ်ပြားစက်ရုံ (Myanmar Posco Steel Co., Ltd.)11. မာမီး ခေါက်ဆွဲစက်ရုံ12. Red Rubby စီးကရက်စက်ရုံ13. ဒူးယားစီးကရက်စက်ရုံ (ပခုက္ကူ)14. မြန်မာဘီယာ ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း15. လန်းပီ ပင်လယ်ရေကြောင်းခရီး ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း16. ငွေပင်လယ် မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်း17. ပင်လယ်ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်း18. ရေထွက်ပစ္စည်း ပို့ကုန်လုပ်ငန်း19. မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ (ကြက်/ငါး/ပုဇွန်)20. ရေလုပ်ငန်း စက်မှုရုံ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း21. တနင်္သာရီတိုင်း ငှက်သိုက် ထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်း22. ဆီအုန်း စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း (ကော့သောင်း)23. သကြားစက်ရုံ (ဥက္ကံ)24. ပဒုမ္မာ ဆပ်ပြာစက်ရုံ (ပေါင်)25. သကြားစက်ရုံ (အင်းငါးခွ)26. တော်ဝင် ပလပ်စတစ် လူသုံးကုန်စက်ရုံ (ကျောက်ဆည်)27. ဆာလဖြူရစ် အက်စစ်စက်ရုံ (မုံရွာ)28. နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်မှုလုပ်ငန်း29. တပ်မတော်သား သက်သာချောင်ချိရေး အရောင်းဆိုင်30. ဒုိ့ယာမြေ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်3း1. ပြည်သာယာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်3း2. Ruby Mart Supermarket33. Pyininbin Industrial Park (in North Yangon’s suburbs)34. Myanmar Five Stars Shipping35. Gandamar Wholesale36. Myanandar Purified Drinking Water37. Myanmar Nobel College (Ahlone, Yangon)38. လွယ်ဂျယ်။မောတောင် (ကျောက်မီးသွေးမိုင်း)39. Myin Gyan Steel Mill40. Ywama Insein Steel Mill41. Kyauk Swe Gyo(near Aung LAN) Steel Mill42. Maymyo Iron Mill43. တာရာစက်ရုံကြီး (အင်းစိန် ရွာမ)44. တန် ၄၀၀၀ ဘိလပ်မြေစက်ရုံ (ဘားအံ)အချက်အလက် အားလုံး မှန်ကန်ကြောင်းကိုတော့ အတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။မှားယွင်းနေတာ ဖြည့်စွက်စရာ ရှိခဲ့ရင် သိသူများက ထပ်မံ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်စေလိုပါတယ်။ တစ်ချို့ဟာတွေက ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ နာမည်အောက်ကလုပ်ငန်းခွဲတွေ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကိုအောက်ဖော်ပြပါ Reference Links တွေမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။(FNG)Ref:https://www.facebook.com/laynuaye.mya/posts/406355786103552http://dazzlepod.com/cable/09RANGOON77/http://en.wikipedia.org/wiki/Union_of_Myanmar_Economic_Holdingshttp://htaytintnl.blogspot.sg/2012/10/blog-post_21.html
သင့်ကြောင့် သင့်ကလေး ဗွီဒီယို ဂိန်းမစွဲပါစေနှင့်။ဗွီဒီယိုဂိန်းများကြောင့် သင့်ကလေး ဖြစ်လာနိင်သည့်ဆိုးကျိုး အလားအလာများကို လူမှုရေးသုတေသီများကသတိပေးလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။၁။ အဒမ်လန်ဆာ လို လူသတ်သမား လေးဖြစ်လာနိင်တယ်။ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကြောင့်ကလေးတွေ ဒေါသပေါက်ကွဲတတ်လာတယ်။စကားပြောတွေရိုင်းလာတယ်။၂။ ကျောင်းမှာစာညံလာတယ်။ ဗွီဒီယိုဂိမ်းများမှာတော်တဲကလေးများ ကျောင်းစာ တွင်အလွန်ညံလာကြသူများဖြစ်လာတယ်။၃။ တချိန်လုံး ဗွီဒီယိုဂိမ်းကစားနေတဲ့အတွက်ကျမ္မာရေးထိခိုက်လာတယ်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မျက်မှန်တပ်လာရမယ်။ကလေးခြင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊လူကြီးတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမလုပ်တဲအတွက် သင်ယူမှု ( Learning Process) ကင်းမဲ့ပြီး လူရာမ၀င်တဲ့သူ။ အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာ ရီးစားမရသူဖြစ်လာမယ်။ အရှုံးသမား ( Loser) လို ခံစားလာတတ်တယ်။ မိဘတွေအပေါ်အဆိုးမြင်ဝါဒီဖြစ်လာမယ်။၄။ အိမ်မှုကိစ္စများကို တာဝန်( Social Responsible) ကို မယူခြင်တဲ့သူလေး ဖြစ်လာတယ်။ တကိုယ်ကောင်းသမားလေးဖြစ်လာနိင်တယ်။၅။ ကလေးတွေကို ကွန်ပြူတာဂိန်းမှာဝေးဝေးထားပါ။ ကလေးခြင်းဆော့ခိုင်းပါ။ စာဖတ်ခိုင်းပါ။ မိသားစုအလုပ်တွေကိုကူညီခိုင်း ပါ လို့ အမေရိကန် ကလေးသူငယ်များ ဖွင့်ဖြိုးရေး ပညာရေး သုတေသီတွေက အကြံပြုထားကြပါတယ်။အမေရိကန်ရောက်မြန်မာမိသားစုကလေးအတောများများဗွီဒီယိုဂိမ်းများကိုစွဲနေကြတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။ ကလေးငြိမ်ရင်ပြီးရော ဆိုပြီး မိဘတွေကလည်း ကျေနပ်နေတာကိုတွေ့ ရတယ်။ဗွီဒီယုိုဂိမ်းထဲမှာ ကလေးတွေကို ပညာပေးတဲ့ဂိန်တွေလဲရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အလွန်နည်းတယ်။မိဘများအနေနဲ့ဂိမ်းအမျိုးစားများကို ရွေးခြယ်ကန့် သတ်ပါ။တနေ့ ကို တနာရီထက်ပို မကစားသင့်ကြောင့် သုတေသီများသတိပေးလာနေကြပါတယ်။
အသေးစိတ်ကြည့်ချင်စီးပွားရေးသပိတ်မှောက်ရခြင်း အကြောင်းရင်းသပိတ်မှောက်ရန် စာရင်း
အစိုးရက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုအပေါ် ကုလသမဂ္ဂ ကန့်ကွက်ကြောင်းနှင့် ဖမ်းဆီးထားသူများအမြန်ပြန်လွှတ်ပေးရန် နှင့်
စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပေးရန်တောင်းဆို
The Government of Myanmar has been urged by the UN
human rights office to release over 100 students and other
protestors arrested after their participation inademonstration on Tuesday.The
protestors in the central town of Latpadan in the southern Bago region of
Myanmar were reportedly calling for reform in the education system.
The Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) has
expressed concern about reports of the use of excessive force by the police.
Daniel Dickinson reports.
The UN said that whileanumber of the 127 protestors who were reportedly
arrested were later released, most of them are still detained in Tharawaddy prison.Approximately 60 of them have been charged under various laws.
The Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) noted that the government has started an inquiry into another incident involving the dispersal of protests in Yangon on5March.
OHCHR Spokesperson Ravina Shamdasani says the government of Myanmar is being urged to also investigate the handling of Tuesday's protests. "We urge the Government to unconditionally release all those detained for the exercise of their rights to peaceful assembly and freedom of expression and to amend the laws that place unnecessary and disproportionate restrictions on people's rights, particularly the Law on the Right to Peaceful Assembly and Peaceful Procession." (19")
Ms Shamdasani said any use of force should be proportional to the seriousness of the offence.
Daniel Dickinson, United Nations
ပညာရေး အသုံးစရိတ် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကြပါ။
Denounce Government Sponsored Terrorism / State-Sponsored Terrorism
Government engages directly in terrorism asatool of their domestic policies. သိန်းစိန် စစ်အစိုးရ ၏ လူသားမဆန် သည့် ရက်စက်ယုတ်မာမှုများ၊ ရာဇ၀တ်မှု များ ၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေမှုများ ၊ ကို နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ် ခုံရုံး ကို တင်နိုင်အောင် အထောက်အထားများနှင့် ဖော်ထုတ်ကြ။ Government engages directly in terrorism asatool of their domestic policies.
လူကုန်ကူးမှု ကို တိုက်ဖျက်ကြ
ကိုးကန့်မြန်မာ အစိုးရ အမှီး ခြင်း ချိတ် သမိုင်း အကျဉ်းချုပ်။ ( အမှတ် ၃ ) ဖုန်ကြာ်းရှင်ကို ရန်ကုန် ကို ဟယ်လီကော်ပတာနဲ့ ပထမ ဆုံးခေါ်လာသူမှာ ၁၉ ၉ ၇ ခုနစ်
ဒုတိုင်းမှု ဗိုလ်မှုးချုပ်သိန်းစိန် ( ယခု ဦးသိန်းစိန် ) ဟုသိရပါတယ်။
ဦးသန်းရွှေ နှင့် ခင်ညွန့် အမိန့် အရ ၁၉ ၉ ၇ ခုနစ်မှာ ၂၀၀၁ ခုနစ်အတွင်းမှာ ၁၆ ခေါက် ဟယ်လီကော်ပတာနှင့် ခေါ်ပေးခဲ့ရကြောင်း စီအိုင်းအေ
မှတ်တမ်းအရသိရတယ်။ ဘိန်း ဖြူ ကို နစ်ဖက် စလုံး ပူးပေါင်း ချက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့DEA မှတ်တမ်း များ အရသိရတယ်။ ဖုန်ကြားရှင်ကို အမေရိကန် က လွဲ ပြောင်းပေးဖုို့ တောင်းဆိုခဲ့ ပါတယ် ။ မြန်မာ့ တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်တွေမပေးပါ။ နိင်ငံသက္ခာ အလွန်ကျခဲ့ရတယ်။ ဘာဖြစ်လုို့လဲဆိုတော့ အတူတူ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ဘိန်းလုပ်ငန်းတွေ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တာတွေ ပေါ်ကုန်မှာစိုးလုို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မောင် အေး ဟာ ဘိန်းလုပ်ငန်း ကိုအများဆုံးလုပ်ကိုင် ခဲ့သူ
လုို့စီအိုင် အေ က မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ ကိုးကန့် မှာ တာဝန်ကျတဲ့ မြန်မာ စစ်တပ် က တာဝန်ရှိသူများရန်ကုန်ကို ပြန်လျှင် ယာမားဆေးကို ဆက်လက်
သယ်ဆောင်နေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယာမား ဆေး ဒေါ်လာ ၅ရာဖုိုးက ရန်ကုန် မှာ ဒေါ်လာ ၂ထောင် ခန့် ရတယ်။ ကိုးကန့် ဒေသ တာဝန် ကျ ဗိုလ်မှုးချုပ်အဆင့် ကနေ
ဗိုလ်ကြီး အဆင့် စစ်သားများ အကုန် ပတ်သက်နေကြောင်း ရန်ကုန်ရှိ အမေရိကန် သံရုံး ( ၂၀၁၄ )ခုနစ် အစီရင်ခံစာ မှာ ဖေါ်ပြထားတယ်။ စစ်ဗိုလ်များရဲ့ မင်္ဂလာ ဆောင် လက် ဆောင် အဖြစ် ပါ ကိုးကန့် မှ ယားမား ဆေးပြားများကို ပေးကြတယ်လုို့ အစီရင်ခံစာမှာဖေါ်ပြထားတယ်။ ရန်ကုန်မှာ မူယစ်ဆေးဝါး အလွန် ပျံနှံနေတဲ့အဓိက တရားခံ တစ်ဟာ မြန်မာ တပ်မတော်ဖြစ်တယ်။ နံပတ် နစ်က ဖုန်ကြားရှင်ရဲ့ ကိုးကန့် တပ်ဖြစ်တယ်။ ကိုးကန့် ကိုတရုပ်အစိုးရက ကူညီ တာ ဆိုပါက တရားဝင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ပါ။ ဖုံးကြားရှင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများ ကို သိမ်းဆည်းကြောင်း တရားဝင်ကြေညာပါ။ ထုိုသို့ မလုပ်ပါက ကျေင်းသားလှုပ်ရှားမှုကို အာရုံလွဲမှုမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုးကန့် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
၁။ မန္တလေးဂရိတ်ဝေါရှော့ပင်းစင်တာ ၂။ မန္တလေးဂရိတ်ဝေါဟိုတယ် ၃။ မန္တလေးတော်ဝင်နှင်းဆီဆေးရုံ ၄။ ၇၈ လမ်းပေါ်က လူနေဆိုင်ခန်းများ ၅။ ကသာသစ်အချောထည်စက်ရုံ ၆။ နီကယ်စက်ရုံ ၇။ သကြားချက်စက်ရုံ ၈။ အီသနောစက်ရုံ ၉။ ကျွန်းစိုက်ခင်းဧက ၈၀၀၀ ၁၀။ တစ်ရှူးသုတေသနဓာတ်ခွဲခန်း ၁၁။ အကြီးမြန် ယူကလစ်စိုက်ခင်းများ ၁၂။ မန္တလေးသိပံ္ပလမ်းပေါ်မှ ယူကလစ်နဲ့ငှက်ပျော စိုက်ခင်း ၁၃။ နန်းတော်ဆေးရုံ ၁၄။ ရန်ကုန်မြို့ ဦးဝိစာရလမ်းပေါ်က နေအိမ်နဲ့ ကုမ္ပဏီရုံး
ထုိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ မှာ ကိုးကန့်၇င်းနှီးမှု အမြောက်အများပါတယ်။ မြန်မာ နာမည်ဦးတင်မောင် (ခ) လီကျန်ရှင်း အမည်နဲ့လုပ်ကိုင် နေပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၆၈ သန်း ဖို့ခန့်၇ှိတယ်။
ပြည်ခုိုင် ဖြိုး ပါတီ (ခ) ကြံ့ဖွတ် ပါတီမှာ မူယစ် ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်သူများ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင် ကိုးကန့်ဘိန်းဘုရင်ငယ်များမှာ ၁။ ပိုင်ဆိုချင် (ခေါ်) ပိုင်စောက်ချဉ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊
ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ၂။ လူကိုးရှိ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ၃။ ဟိုရှောက်ချန်း (ခေါ်) ဦးဟော် (ခေါ်) ဟော်လောက်စန်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ၄။ ကျောက်ဒယ်ချန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ၅။ မြင့်လွင် (ခေါ်) ဝန်ခိုးတာ့၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ြ ပည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ကိုးကန် နဲ့မြန်မာ - သူတို့ မကြာခင် စေ့ စပ်မယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လုပ်မယ်။ MPC ထံကို ရောက်လာမယ်။ တရုပ်အစိုးရက ကြားဝင် ဆောင်ရွက် နေပြီ ဟုသိရပါတယ်။
တကယ်လုို့ဒီအချက်အလက်တွေကို ငြင်းဆိုမဲ့သူရှိပါက အချက်အလက် မှတ်တမ်းများ (ထပ်မံ ထုတ်ပေးနိင်ပါတယ်။ )
Every Voice Counts on education reform! ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှု ဆိုတာ ရာဇ၀တ်ကျူးလွန်တဲ့အမှု၊ နိုင်ငံတော် မတည်ငြိမ်မှု ကို ဖြစ်ပေါ်အောင်လှုံ့ဆော်နေတာမဟုတ်ဘူး။
ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ကျောင်းသား၊မိဘ ပြည်သူတွေ က လွှတ်တော်မှာ နိုင်ငံတော် ရဲ့ ငွေ၊ အခွန်ဆောင်သူတွေရဲ့ ငွေ တွေ သုံးစွဲနေကြတဲ့ အိပ်ပျော်နေကြသည့် လွှတ်တော်အမတ်တွေ၊ အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တွေ ကို အလုပ်လုပ်ဖို့ ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှု သာဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှု နောက်ကွယ် မှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ မိဘပြည်သူတွေ၊ လွှတ်တော်အမတ်တွေ ဟာ ပါဝင်ပက်သက်မှု ရှိကိုရှိရတယ်။
မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့ ပြည်သူတွေ ကို နောက်ကွယ် က ကြိုးကိုင်မှု ရှိနေတယ်လို့ စွပ်စွဲတယ်ဆိုတာ အစိုးရ တရပ်ရဲ့ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု မရှိသည့် သူရဲဘော်ကြောင် အောက်တန်းစား ဆန်တဲ့ နိုင်ငံရေး စွပ်စွဲချက်သာဖြစ်တယ်။
အနာဂတ်တိုင်းပြည်၊ အနာဂတ် ခေါင်းဆောင်တွေ အတွက် ထောက်ခံမှု၊ တောင်းဆို ပါဝင်ပက်သက်မှုတွေ မရှိရင်တော့ ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်တိုင်း မှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေကော၊ လွှတ်တော်အမတ် တွေ ကော နောင်လာမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ တွေရဲ့
ရလာဒ်တွေ မှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာလိမ့်မယ်။
အမေရိကန် တက္ကသိုလ်ကျောင်း တကျောင်း မှာ ကျောင်းသားတွေ ၊ နယ်ပယ်အသီးသီးက ပါမောက္ခတွေ နှင့် ပညာရေး အုပ်ချုပ်ရေးမှုးတွေ က မဲပေးခွင့်ရှိကြတဲ့ ပြည်သူ တွေ မှတဆင့် ဒေသဆိုင်ရာ လွှတ်တော်အမတ်တွေ ကို ပြည်နယ် လွှတ်တော်တွေမှာ ပညာရေးလှုပ်ရှားမှု တွေ အတွက် ဘယ်လို အဆိုတင်သွင်း သင့်လဲဆိုတာ ဖတ်ကြည့်ပါ။
မြန်မာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ကို အမြဲဆိုသလို တစ္ဆေခြောက်ခြင်း ခံခဲ့ရသည့် Made in China ပြဿ နာ
ဗိုလ်ရှု့ခံ မှာ ထုတ်ပြခဲ့တဲ့ Made in China စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရဲ့ သမိုင်း အကြောင်းပါ။
ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင်ကာလမှစတင်ပြီး နအဖ စစ်အုပ်စုကို တရုတ်နိုင်ငံက ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့တဲ့ ချင်ဒူး Chengdu Jian-7 (export versions F-7) နှင့် F-7M တိုက်လေယာဉ်များဟာ ရုရှား လုပ် Mikoyan-Gurevich MiG-21 တိုက်လေယာဉ်များမှာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ နည်းပညာ အားနည်းချက်၊ ချို့ ယွင်းချက်တွေကို ပြင်ဆင်ကာ ပုံတူခိုးချ ထားတဲ့ တိုက်လေယာဉ် အမျိုးအစားများဖြစ်ပြီး ၁၉၆၆ ခုနှစ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ပထမဆုံး စမ်းသပ်ပျံသန်းခဲ့တယ်လို့ သိရှိရတယ်။ ဒီတိုက်လေယာဉ်များ ကို ၁၉၈၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ် အတောအတွင်း နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များသို့ တင်ပို့ရောင်းချ ခဲ့တယ်။
၁၉၅၀-၁၉၆၀ ခုနှစ်ကတည်း ရုရှားနည်းပညာ အကူအညီဖြင့် ပုံတူထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ချင်ဒူး Chengdu Jian-7 (export versions F-7) နှင့် F-7M တိုက်လေယာဉ်များဟာ အိုမင်းနေမှု၊ နည်းပညာ ချွတ်ယွင်းမှုများ မကြာခဏဆိုသလို ကြုံတွေ့လာရမှုတွေကြောင့် ယခုအခါ တရုတ်လေယာဉ်သမိုင်းပြတိုက်တွေမှာတောင် ပြသနေရတဲ့ အဆင့်ကိုရောက်ရှိ နေပြီဖြစ်ကြောင်း တရုတ်အစိုးရက အတည်ပြုခဲ့သည်။
ဒီလေယာဉ်တွေ ကို တရုတ်အစိုးရ ရဲ့ အဆိုအရ ၆၄ စင်းကို နအဖထံသို့ ၁၉၈၀ -၁၉၉၀ ပတ်ဝန်းကျင်ကာလ အတောအတွင်းရောင်းချခဲ့ပြီး၊ အပျက်အစီးနှင့် နည်းပညာ ချို့ယွင်းမှုတွေကြောင့် ၃၆ စင်းသာ ကျန်ရှိတော့တယ်လို့သိရတယ်။ တရုတ်လုပ် တိုက်လေယာဉ်များပေါ်တွင် တင်ဆောင်လာတဲ့ ဝေဟင်ပစ်ဒုံးကျည်တွေ ဟာ ကွန်ပြူတာနည်းပညာ ချို့ယွင်းမှုတွေကြောင့် လေဆာထိမ်းချုပ်မှုဖြင့် ပစ်ခတ်နိုင်စွမ်း မရှိဘူးလို့ ခိုင်လုံတဲ့ စစ်ဘက်ထောက်လှမ်းရေး သတင်းများ အရလည်း သိရှိရပါသည်။ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ပြဿနာစစ်ပွဲ မှာ ဒီအချက်ဟာ မှန်ကန်ခဲ့ကြောင်း အတည်ပြု ပြောကြားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ထောက်ပြပြောဆိုကြသည်။
ခုနှစ်မှာတော့ ကျန်ရှိတဲ့ Chengdu Jian-7 (export versions F-7) တိုက်လေယာဉ် ၃၆ စင်းကို ပြုပြင်မွမ်းမံပြင်ဆင်ဖို့ အစ္စရေးနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ Elbit ကုမ္ပဏီနဲ့ သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း တရုတ်က ပြန်လည် မွမ်းမံပြီးပုံတူခိုး မူကွဲ ထုတ်တားတဲ့ ဒီလေယာဉ်အမျိုးအစားဟာ အရည်အသွေးအဆင့် မမှီတာကြောင့် ၀ယ်ယူခဲ့ကြတဲ့ နိုင်ငံအတော်များများမှာလည်း ပျက်ကျခဲ့ကြပြီး၊ လေယာဉ်မှူးများလည်း မကြခဏဆိုသလို အသက်ဆုံးရှုံး ခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။
ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချရာမှာ မူလထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံအစိုးရတွေဟာ အဆင့်မြင့်နည်းပညာ အပြည့်အ၀မပါဝင်တဲ့ Version B မူကွဲ ပုံစံအသစ်ဖြင့် ရောင်းချခဲ့သလို၊ ထပ်ဆင့်ပုံတူ ခိုးချထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ နိုင်ငံတွေဟာလည်း Version C မူကွဲ ပုံစံအသစ်ဖြင့် ထပ်မံရောင်းချလေ့ ရှိကြတယ်။ ရောင်းချမှုမှာ နှစ်နိုင်ငံ စစ်ရေးသဘောတူစာချုပ်များ ပေါ်တွင်လည်း
မှုတည်လေ့ရှိတယ်။ ဥပမာ- ထိုင်း-အမေရိကန် စစ်ရေးသဘောတူ စာချုပ်များအရ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရောင်းချခဲ့တဲ့ F16 တိုက်လေယာဉ်များမှာ အဆင့်မြင့်နည်းပညာအချို့ မပါဝင်တဲ့ Version B မူကွဲ ပုံစံကိုရောင်းချခဲ့သော်လည်း၊ နှစ်နိုင်ငံ စစ်ရေးသဘောတူ စာချုပ်များအရ အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် ချန်လှပ်ထားသည့် နည်းပညာများကို အလွယ်တကူ တပ်ဆင်သုံးစွဲသွားနိုင်ရန်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားပေးတယ်။ ထို့အတူ ရုရှား လုပ် Mikoyan-Gurevich MiG-21 တိုက်လေယာဉ်များတွင် နည်းပညာအချို့ကို ချန်လှပ်ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်သလို၊ ယင်းကို ပုံတူခိုးချထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့သည့် Chengdu Jian-7 (export versions F-7) များတွင်လည်း မူလ နည်းပညာများပါဝင်မှု မရှိခဲ့ပါ။
၁၉၉၀ ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကာလ ၊
တနည်းအားဖြင့် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက် မကြာခင်မှာပဲ နအဖစစ်အုပ်စု ခေါင်းဆောင်များဟာ တရုတ်အစိုးရမှ ယင်း Chengdu Jian-7 (export versions F-7) နှင့် နှင့် F-7M တိုက်လေယာဉ်များကို ထပ်မံ ၀ယ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြန်တယ်။ ယင်း တိုက်လေယာဉ်များဟာ အရည်အသွေးအဆင့်မမှီတော့ သလို၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများရှိ တိုက်လေယာဉ်များကို မယှဉ်နိုင်တာကြောင့်၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံလုပ် မီရပ်ခ်ျ တိုက်လေယာဉ်များ ကို ၀ယ်ယူဖို့ မိတ္တီလာလေတပ်အခြေစိုက်စခန်းမှ ကျွမ်းကျင်သူ
ပညာရှင် လေတပ်အရာရှိကြီးတစ်ဦးက အခြအတင်ဆွေးနွေးတင်ပြပြီး အကြံပြုခဲ့ဘူးပါသည်။ ထိုစဉ်က တရုတ်အစိုးရ၏ နိုင်ငံရေးထောက်ခံမှုရရှိအောင်ကျိုးစားနေသည့် နအဖ စစ်ခေါင်းဆောင်များ ၏ နိုင်ငံရေးလှို့ဝှက် ကြံစည်မှုများကြောင့် ယင်းအရာရှိကြီးမှာ မြစ်ကြီးနားအခြေစိုက် လေတပ်စခန်းသို့ ပြောင်းရွေှ့ခြင်းခံခဲ့ရပြီး၊ နောက်ဆုံးတွင် အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန မှတဆင့် ရာထူးမှ အနားယူခြင်း ခံခဲ့ရတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအပြီး တရုတ်အစိုးရ၏ထောက်ခံမှုကိုရရှိလိုသော နအဖ စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်များ က တရုတ်အစိုးရနှင့် ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်အောင် ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများကို ၀ယ်ယူခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်တယ်လို့ နောက်ပိုင်းမှာသိရှိခဲ့ရတယ်။ ယင်းဖြစ်ရပ် ကို စစ်တပ်အတွင်းရှိ လူငယ်အရာရှိများ မသိရှိအောင်တော့ ဖုံးကွယ်ခဲ့ကြသည်။
မြန်မာ့လေတပ်တွင် အသင့်အနေအထားရှိနေကြသည့် လေ့ကျင့်ရေးနှင့် လေကြောင်းကာကွယ်ရေး လေယာဉ်များတွင် တရုတ်လုပ် ချင်ဒူး(Chengdu)၊ရှင်ယန်း(Shenyang)၊နန်ချန်(Nanchang) ရှန်စီ(Shaanxi)၊ ဟုန်ဒူး(Hongdu)လေယာဉ်များသာ ရှိကြတာကြောင့် လေယာဉ်မှူးများကလည်း မောင်းနှင်ဖို့ အထိတ်တလန့်အဖြစ် ရောက်ရှိနေကြပြီး၊ နအဖ ခေါင်းဆောင်များလည်း
သူ့တို့၏မှားယွင်းခဲ့သော ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် အမြဲဆိုသလို တစ္ဆေခြောက်ခြင်းခံနေရပါပြီ။
အနှစ်ချုပ်ဆိုရသော် ယနေ့ မြန်မာလေတပ်အတွင်း လေ့ကျင့်ပျံသန်းနေသော ဒေါ်လာ သန်းချီကုန်ကျ ခဲ့ရသည့် Chengdu Jian-7 (export versions F-7) နှင့် F-7M တိုက်လေယာဉ်များ ပျက်ကျနေမှု၊ အဖိုးတန်သော လေယာဉ်မှူးများဆုံးရှုံးနေမှုသည် တာဝန်ယူမှု မရှိသည့် နအဖ စစ်အုပ်စု ခေါင်းဆောင်များ၏ဆုံးဖြတ်ချက် မှားယွင်းခဲ့မှု များကြောင့်သာဖြစ်ပြီး၊ အမှားကို ၀န်ခံဖို့ သူရဲဘောကြောင်နေကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်လို့ မှတ်ယူရပါတော့မည်။
ကိုးကား- Israeli military aid to Burmese regime: Jane's
"မြန်မာနိုင်ငံ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဖျက်စီးနေသူများ ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ရှုံ့ချကြ၊ ဆန့်ကျင်ကြ"
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိန်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု မှာ လေးနက်မှု မရှိဘူး၊ ထိခိုက်မှုကို လျော့ချရန် စနစ်တကျပြုလုပ်မှုမရှိဘူးလို့ မြန်မာနိုင်ငံ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိန်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အဖွဲ့ က စာမျက်နှာ ၁၀၀ ကျော် ရေးသားထားတဲ့ အစီခံစာ ကို ထုတ်ပြန် ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။
ယင်းအဖွဲ့ကြီးက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိန်း
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု တွေမှာ ပြည်တွင်း ဥပဒေတွေ၊ မူဝါဒ ရှိနေသော်လည်း၊ ပြည်သူတွေရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဟန့်တားထားမှု၊ တင်းကျပ်သည့် တားမြစ်ချက်တွေရှိနေတာကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိန်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု ဆိုင် ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မှာ ပြည်သူတွေရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေ မရှိဖြစ်နေခဲ့ရတယ်လို့ ဖော်ပြထားတယ်။
နိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခ တွေ ရှိနေတာကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု တွေမှာ တရားဥပဒေ၊စံနှုန်းစံထားတွေ၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေမှာ အားနည်းနေပြီး၊ ထိရောက်စွာ တားစီးမှု မလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့် ပိုမိုဆိုးဝါးသည့် အခြေအနေသို့
တွန်းပို့ပေးနေကြောင်း အစီရင်ခံစာထဲမှာ ဖော်ပြပါရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် တရားမ၀င် သစ်ခိုးထုတ် မှုတွေဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေ အကြီးမားဆုံး ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ နေရာ အနှံ့အပြားမှာ သစ်ထုတ်လုပ် ရောင်းချမှုများကို အချိန်ကာလအားဖြင့် ကြာမြင့်လာပြီ ဖြစ်သဖြင့် သစ်တောရင်းမြစ်တွေ ပျက်စီးနေခြင်း၊ ကျောက်မျက်၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အပါအ၀င် သဘာဝသံယာဇာတတွေ အလျင်တလို ထုတ်ဖော်တူးယူ နေမှုကြောင့်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက် ပျက်စီးဆုံးရှုံး နေခြင်း၊ ရေကာတာများတည်ဆောက်နေမှုတွေကြောင့် ရေခန်းးခြောက်မှု၊မြေပြိုမှု၊ ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ် လာကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတယ်။ လေဒဏ်၊ မိုးဒဏ်နဲ့ ပင်လယ်ဒီရေတွေကို ဟန့်တားနိုင်ဖို့ ဒီရေတောတွေ ကိုလည်း ထိန်းသိမ်း မှုမရှိ၊ သစ်တောတွေကို လည်း ထိမ်းသိမ်းမှု မရှိခြင်းတို့ကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများရှိနေကြောင်း ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများရှိနေသဖြင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲ လာကာ ငလျင်လှုပ်မှု၊ မုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်မှု၊ ရေလွှမ်းမိုးနေမှု၊ မိုးခေါင်မှု စတဲ့ သဘာဝ ဘေးအန္တာရယ် တွေကို ခံစားနေရကြောင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။
ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး အပေါ် သူတို့ အမြင်
ဧက ၁၀၀ ကျော် ကျယ်ဝန်းသော သမိုင်းဝင် ကျိုက္ကဆံကွင်းကို အား/ကာ ၀န်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် စီးပွားဖြစ် အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် စီစဉ်မှု အလွှာအသီးသီးက ၀ိုင်းဝန်း ကန့်ကွက်
(Written By: မာန်သူရှိန်)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လူထုစည်းအဝေးပွဲ လုပ်ဖူးတဲ့ သိမ်ဖြူ အားကစားကွင်းကို ပုဂ္ဂလိက လက်ကိုအပ် စီးပွားဖြစ်ကွန်ဒို ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခွင့် ပေးပြီးတဲ့နောက် အခု ဧက ၁၀၀ ကျော် ကျယ်ဝန်းတဲ့ သမိုင်းဝင် ကျိုက္ကဆံကွင်းကြီးကို အားကစား ၀န်ကြီးဌာနက တစ်ဆင့် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ အချို့က စီးပွားဖြစ် လုပ်ငန်းတွေ ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ဖို့ စီစဉ်နေကြ ပြန်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာ ပန်းခြံ ၆၃ ခု၊ ကစားကွင်း ၉၉ ခုလို့ ဆိုပေမယ့် စာရင်းအဖြစ်ပဲ ရှိနေပြီး တကယ် လောက်လောက်လားလား အပန်းဖြေနိုင်တဲ့ ပန်းခြံနဲ့က လက်နှစ်ဖက် မပြည့်ပါဘူး။
ပန်းခြံနဲ့ ကစားကွင်းတွေ ရှားပါးလာတဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာ
ဧကကျယ်ကျယ်နဲ့ အများပြည်သူအတွက် နေရာလပ် ကျန်တာဆိုလို့ သမိုင်းဝင် ကျိုက္ကဆံကွင်း တစ်ခုပဲ ရှိပါတော့တယ်။ ကျန်တဲ့ မြေကွက်ကျယ်တွေကတော့ လုပ်ငန်းရှင်တွေက အုပ်ချုပ်သူ အဆက်ဆက်နဲ့ ပေါင်းပြီး အမွေခွဲသလို ခွဲယူထားလို့ မကျန်သလောက်ပါပဲ။ အခု တစ်ခုတည်းကျန်တဲ့ သမိုင်းဝင် ကွင်းကြီးကိုပါ စီးပွားဖြစ်လုပ်ဖို့ စီစဉ်နေတာပါ။
အများပြည်သူကိုလည်း ချပြမှု လုံးဝမရှိ၊ လွှတ်တော်ကိုလည်း လုံးဝ အသိမပေးဘဲ လုပ်မယ့် ကုမ္ပဏီက နိုင်ငံတော်သမ္မတထံကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုဖို့ အဆိုပြုလွှာတောင် တင်ထားပြီးပြီလို့ သိရပါတယ်။
ဒီပုံစံက ဘာနဲ့တူသလဲ ဆိုတော့ ခွင့်ပြုချက်ရပြီး လုပ်တော့မယ်ဆိုမှ ပြည်သူနဲ့ လွှတ်တော် သိခွင့်ရလိုက်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်း လုပ်ခွင့်ရဖို့ လုပ်သွားတဲ့ပုံစံ၊ လက်သိပ်ထိုး ပုံစံနဲ့ အတူတူပါပဲ။
အလွှာအသီးသီးက ပညာရှင်တွေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပါ လုံးဝ ကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့ တကယ်လို့ ခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ် ဆိုရင် ခွင့်ပြုတဲ့သူဟာ ဘယ်အစိုးရ လက်ထက်ရောက်ရောက် တာဝန်ယူရမယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောတဲ့အထိ ကန့်ကွက်ပြောကြား လာကြပါတယ်။
ကျိုက္ကဆံကွင်းဟာ ဗြိတိသျှ လက်ထက်က စလို့ တပ်မတော်အစိုးရ လက်ထက်အဆုံး သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေ ရှိခဲ့တဲ့ ကွင်းဖြစ်ပြီး ဧက ၁၀၀ ကျော်အထိ ကျယ်ပါတယ်။
ဗြိတိသျှ လက်အောက်တုန်းက မြင်းပြိုင်ပွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ အထင်ကရ နေရာတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်ရောက်တော့ မြင်းကွင်းကို ဖျက်ပြီး လူထုစုဝေးနိုင်တဲ့ ကွင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။
ကျိုက္ကဆံ ကွင်းကြီးထဲမှာ ပြည်ထောင်စုနေ့၊ တောင်သူလယ်သမားနေ့၊ အလုပ်သမားနေ့လိုမျိုး အထင်ကရ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွေ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
အလုပ်သမားတွေအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်ဖို့ အလုပ်သမား ညီလာခံ ကျင်းပခဲ့တာဟာလည်း ကျိုက္ကဆံကွင်းကြီးထဲမှာပဲ လုပ်ခဲ့တာပါ။
ပြည်ထောင်စုနေ့မှာဆိုရင် တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်၊ တောင်ပေါ်မြေပြန့် အားလုံး၊ တစ်နိုင်ငံလုံးက ပြည်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ လာရောက်စုဝေးပြီး ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားကို အကြီးအကျယ် ကျင်းပခဲ့တာကလည်း ဒီ ကျိုက္ကဆံကွင်းကြီးထဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ဦးသန့် ရုပ်ကလာပ်ကို ၁၉၇၄ ခုနှစ်တုန်းက အမေရိကန်ကနေ ပြန်လည် သယ်ဆောင်လာပြီးတဲ့နောက် ကျိုက္ကဆံကွင်းထဲမှာပဲ ထားခဲ့တဲ့ သမိုင်းလည်း ရှိခဲ့တာပါ။
နောက်ဆုံး တပ်မတော်အစိုးရ လက်ထက် ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲဖို့အတွက် အမျိုးသားညီလာခံ စပြီး ကျင်းပတာကလည်း ကျိုက္ကဆံကွင်းထဲမှာပဲ စပြီး ကျင်းပခဲ့တာ။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျိုက္ကဆံကွင်းဟာ သမိုင်းကြောင်း ရှိခဲ့တဲ့ကွင်း ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ရန်ကုန်မှာ အများပြည်သူ အတွက်လည်း တစ်ခုတည်းကျန်တဲ့ မြေကွက်လပ် တစ်ခုပါ။
ခေါင်းစဉ်က အားကစားမြှင့်တင်ဖို့ လုပ်မှာက စီးပွားဖြစ်
အခု သမိုင်းဝင် ကျိုက္ကဆံကွင်းကို အားကာသိပ္ပံကို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မြှင့်တင်ပေးမယ့် ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး တကယ်ကတော့ စီးပွားဖြစ် လုပ်ငန်းတွေပါ လုပ်ကိုင်ဖို့ စီစဉ်လာကြတာပါ။
ဂျပန်နိုင်ငံက Raysum Co., Ltd၊ Ikeya Corporation နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ Mariana Investment Pte.Ltd တို့ ပူးပေါင်းပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ Kyaik Ka San Land Development Pte.Ltd ဆို ပြီး ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြပါတယ်။
Investment Pte.Ltd ဆိုတာက မြန်မာနိုင်ငံက သစ်လုပ်ငန်း အဓိက လုပ်ကိုင်နေတဲ့ Diamond Mercury ကုမ္ပဏီအုပ်စုက ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းရှင်က ဦးစိန်လွင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နဲ့ မြန်မာ ပေါင်းထားတဲ့ Kyaik Ka San Land Development Pte.Ltd က ကျိုက္ကဆံကွင်းထဲက အားကာသိပ္ပံကို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မြှင့်တင်ပေးမယ်၊ ကျန်တဲ့ မြေကွက်လွတ်တွေမှာတော့ ရှော့ပင်းစင်တာတွေ၊ စူပါမားကတ်တွေအပြင် စီးပွားဖြစ်ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံတွေ တည်ဆောက်လုပ်ကိုင်မယ့် Central Business District (CBD) မြို့ တည်ထောင်လုပ်ကိုင်ဖို့အထိ စီစဉ်ထားတာပါ။
အားကစားနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ အလုပ်တွေ၊ အများပြည်သူ အပန်းဖြေတာနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့
လုပ်ငန်းတွေပါ လုပ်ဖို့တင်ပြတဲ့အပေါ် အားကစားကွင်းတွေကို ကာကွယ်ပေးရမယ့် တာဝန်ရှိတဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင့်ဆန်း တာဝန်ယူထားတဲ့ အားကစား ၀န်ကြီးဌာနကလည်း ကန့်ကွက်မှု မရှိဘူး။ နိုင်ငံတော် သမ္မတထံ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုဖို့ တင်ပြတာကိုလည်း သဘောတူခဲ့ပါတယ်။
Kyaik Ka San
Land Development Pte.Ltd ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ Diamond Mercury ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ လုပ်ငန်းရှင် ဦးစိန်လွင်က “ဒီအားကစားသိပ္ပံကြီးကို ဖွင့်လိုက်ရင် ဒီကျောင်းမှာရှိတဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက် အထပ်မြင့်တွေ၊ အထပ်မြင့်မြင့်နဲ့ အဲယားကွန်းတွေ နေထိုင်မှု အဆင့်မြင့်မြင့်တွေ အကုန်ပါတော့ ၀န်ကြီးကတော့ လက်ခံပါတယ်။ ပိုတဲ့မြေကို CBD လုပ်မှလည်း မြေကြီးက တန်ဖိုးရှိမှာလေ။ ဒါကလည်း နိုင်ငံတော်အတွက် Land Mark တစ်ခု ပေါ်လာမှာလေ။ ၂၆ ရက်က ၀န်ကြီးချုပ်လည်း ပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလည်း ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ
မြို့တော်ဝန်လည်း ပါတယ်။ နောက်ပြီး စီးပွားရေးဝန်ကြီးပေါ့ ရန်ကုန်ကပေါ့။ သူတို့ကို ရှင်းပြတယ်။ သူတို့ကလည်း လက်ခံတယ်။ အဲဒါ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကို သွားရှင်းပြတာ။ အားကစားဝန်ကြီးတွေကို ထပ်ရှင်းပြတယ်။ နောက်ဆုံး ထွက်လာတဲ့ အခါကျတော့ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ကို တင်ပြတယ်။ အဲဒါပြီးတော့ သစ်တောဝန်ကြီးကို တင်ပြတယ်” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေရှိပြီး နည်းပညာနဲ့ အရင်းအနှီးတွေ ၀င်လာမယ်၊ နိုင်ငံအတွက် Land Mark တစ်ခု ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် လုပ်တာလို့ ဦးစိန်လွင်က ရှင်းပြခဲ့ပါသေးတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ သမ္မတထံကို အဆိုပြုလွှာ ရောက်သွားပြီး သမ္မတ ခွင့်ပြုတာနဲ့ ကျိုက္ကဆံကွင်းကြီးဟာ အားကစားအဆင့်မြှင့်မှု ခေါင်းစဉ်နဲ့အတူ စီးပွားဖြစ် လုပ်ကိုင်ခံရမယ့် နေရာအဖြစ် ပြောင်းသွားတော့မှာပါ။
ဒီနေရာမှာ သတိထားစရာ တစ်ခုက နိုင်ငံတော်က ချမှတ်ထားတဲ့ တင်ဒါမူဝါဒနဲ့လည်း မဟုတ်ဘူး။ တင်ဒါခေါ်ယူတာမျိုးလည်း မဟုတ်ဘဲ လာရောက်တင်ပြတဲ့ အဆိုပြုလွှာ၊ အားကစားနဲ့ မပတ်သက်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေပါ ပါဝင်လုပ်ကိုင်မယ့် အဆိုပြုလွှာ၊ အားကစားသီးသန့် စီမံကိန်း မဟုတ်တဲ့ အဆိုပြုလွှာကို ဘာကြောင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက မကန့်ကွက်တာလဲဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ကောင်းနေပါတယ်။
ပြင်ပမှာလည်း လက်ရှိ အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင့်ဆန်း တည်ထောင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ACE ကုမ္ပဏီ(ယခု ဦးဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်း လုပ်ကိုင်နေ) နဲ့ ပတ်သက်တယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်လာခဲ့တာလည်း ရှိနေတဲ့အတွက် ဘာကြောင့် မကန့်ကွက်ရတာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းက မေးစရာ ကောင်းခဲ့တာပါ။
ACE ကုမ္ပဏီ ဆိုတာကလည်း နေပြည်တော်က ကျပ်ဘီလျံ ရာပေါင်းများစွာ သုံးစွဲပြီးဆောက်ခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ စီမံကိန်း၊ ပျဉ်းမနားက ပေါင်းလောင်းအားကစားကွင်း၊ သပြေကုန်းက အစိုးရ ၀န်ထမ်းအိမ်ရာ၊ အဆင့်မြင့်ဈေး၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့မှာ တိုက်ခန်းတွဲပေါင်းများစွာ ဆောက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီပါ။
အကြမ်းထည်အဆင့်တင် ကျပ်သန်းပေါင်း ၃၀၀၀၀၀ အထိ ကုန်ကျခဲ့တာကို ကြည့်တာနဲ့တင် (အချောသပ်စာ ကုန်ကျစရိတ် မထုတ်ပြန်) ACE ကုမ္ပဏီရတဲ့ စီမံကိန်းတွေဟာ ဘယ်လောက် ကြီးမားခဲ့တယ်ဆိုတာ၊ တည်ဆောက်ခွင့်ရလို့ အကျိုးအမြတ် ဘယ်လောက်အထိ ရခဲ့တယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းနိုင်ကြမှာပါ။
ဒါ့ထက်ပိုပြီး နီးနီးစပ်စပ် ပြရရင် ဘာတင်ဒါမှ ခေါ်စရာမလိုဘဲ ကျပ်သန်း ၃၀၀၀ အကုန်အကျခံဆောက်တဲ့ ဗိုလ်ရှုခံ ဆောက်လုပ်ခွင့်ကိုလည်း ACE ကုမ္ပဏီကပဲ ရခဲ့တာကိုကြည့်ရင် ACE ကုမ္ပဏီဟာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ဘယ်လောက်ရခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ခန့်မှန်းနိုင်ကြမှာပါ။
ACE Group ရဲ့အောက်မှာလည်း ဆောက်လုပ်ရေးအပြင် ဟိုတယ်၊ ခရီးသွား၊ Trading၊ မီဒီယာလုပ်ငန်းတွေအပြင် အခြားလုပ်ငန်းတွေပါ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကြီးမားတဲ့ ကုမ္ပဏီအုပ်စု တစ်ခုပါ။
ကြီးမားတဲ့ ကုမ္ပဏီအုပ်စုဖြစ်လို့ ကျိုက္ကဆံကွင်း စီမံကိန်းလို ကြီးမားတဲ့ စီမံကိန်းမှာ ACE ပါနိုင်တယ်လို့ အသံထွက်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဆီးဂိမ်းစ်ပြိုင်ပွဲ အကြိုလှုံ့ဆော်တဲ့လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးတဲ့ အခါမှာလည်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင့်ဆန်း တည်ထောင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ACE အုပ်စုအောက်မှာ ရှိတဲ့ ADMA Media ကပါ လုပ်ကိုင်ခွင့် ရသွားတာမျိုးကလည်း ရှိထားတော့ ဒီလိုစီမံကိန်းမှာ ACE ပါတယ်လို့ အသံထွက်လာတာလည်း ဖြစ်မှာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ဦးစိန်လွင်ကတော့ ကုမ္ပဏီချင်းကတော့ ရင်းနှီးပေမယ့် ငွေကြေးကိစ္စအားလုံး ACE နဲ့ မပတ်သက်ဘူး၊ အရင်းအနှီးကလည်း ဂျပန်ဘက်က စိုက်ထုတ်မယ်၊ ဒေါ်လာဘီလျံနဲ့ချီပြီး မြှုပ်နှံမယ်လို့ ACE နဲ့ မပတ်သက်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့တယ်။
မပတ်သက်ဘူး ဆိုပေမယ့် မကန့်ကွက်ခဲ့တာ၊ သဘောတူတာ၊ ဂျပန်ကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့ အနေအထားကို ကြည့်ရင်တော့ မပြေးသော်လည်း ကန်ရာရှိ ဆိုသလို အားကစားဝန်ကြီးဌာနဟာ ကျိုက္ကဆံကွင်း စီမံကိန်းကို လုပ်ချင်တဲ့ဘက်မှာ
နိုင်ငံတော်က ဘတ်ဂျက်ပေါင်းများ စွာချထားပေးပြီး တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ စီမံကိန်းကြီးပေါင်းများစွာ ဆောက်ခွင့်ရပေမယ့် ACE အနေနဲ့ကတော့ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ထုတ်တဲ့ ထိပ်တန်းအခွန်ထမ်း ၅၀၀ ဦးစာရင်း၊ အခု နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့ ထိပ်တန်းအခွန်ထမ်း ၁၀၀၀ ဦးစာရင်းမှာ ပါဝင်လာခြင်း မရှိပါဘူး။ အခု နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တာမှာတော့ အချိန်နောက်ကျပြီးမှ အခွန်ပေးဆောင်တဲ့ စာရင်းမှာတော့ ပါဝင်ပြီး ကျပ်သန်း ၂၀၀၀ အောက် ပေးဆောင်ခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားတယ်။
အားကစားဝန်ကြီးဌာန အနေနဲ့ အခုလို သမိုင်းဝင်နေရာကို
စီမံကိန်းလုပ်တဲ့ ကိစ္စမျိုးထက် ဥပမာ - အောင်ဆန်းကွင်းမှာ ဆိုင်ခန်းပေါင်း ၃၂၁ ခန်းရှိတယ်။ တစ်ခန်းကို ပျမ်းမျှ တစ်လ ကျပ် ၁၂၀၀၀ ကျော်ပဲ နိုင်ငံတော်က
ငှားခရတယ်။ ဒီလို နည်းပါးလွန်းတဲ့ ငှားခတွေကို ခေတ်နဲ့အညီ ပြင်ဆင်ဖို့ လုပ်သင့်တာပါ။
ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒ ပြည်သူတွေရဲ့ အသံကတော့ . . .
ကျိုက္ကဆံကွင်းကြီးကို အားကစားနဲ့ မပတ်သက်၊ အများပြည်သူနဲ့ မပတ်သက်တဲ့ စီးပွားဖြစ် လုပ်ငန်းတွေပါ ထည့်လုပ်ဖို့ စီစဉ်တဲ့ အပေါ်မှာတော့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ မြို့ပြပညာရှင်၊ အားကစားပညာရှင်နဲ့ အလွှာအသီးသီးကတော့
ကန့်ကွက်တယ်၊ ပေးခဲ့ရင်တောင် ပေးခဲ့တဲ့သူက သမိုင်းတရားခံ၊ ဒီလို ပွင့်လင်းမှုမရှိဘဲ ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် နောင်အစိုးရ လက်ထက် အဆက်ဆက်ထိ ပေးခဲ့တဲ့သူတွေ တာဝန်ယူရမယ်၊ တာဝန်ခံရမယ် ဆိုတဲ့အထိ ထုတ်ဖော်ပြောကြား ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒေါက်တာညိုညိုသင်း (ဗဟန်းမဲဆန္ဒနယ်-၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်
“ကျွန်မတို့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅၁ က အတိအလင်း ဖော်ပြထားတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ စီမံဆောင်ရွက်မယ့် စီမံကိန်းများကို လွှတ်တော်သို့ တင်ပြပြီးမှ ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ ဖော်ပြပြီးသား။ နိုင်ငံတော်သမ္မတကို မတင်ခင်မှာ သူတို့က ကျွန်မတို့ လွှတ်တော်မှာ အတည်ပြုချက် ယူကိုယူရမယ်။ လွှတ်တော်ကော်မတီက ဆွေးနွေးတာတွေ၊ တင်ဒါကော်မတီကို စစ်တာတွေ၊ အဲဒါတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်က အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ပြီးမှ နိုင်ငံတော်သမ္မတက လက်ခံစဉ်းစားသင့်တယ်လေ”
“အခုလိုမျိုး (ကျိုက္ကဆံကွင်းစီမံကိန်း) သေချာတယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့က နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကို ပြောရမှာပဲလေ။ မဖြစ်သင့်တဲ့အကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးထားခြင်း မရှိဘဲနဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက တင်ပြတာဟာ မဖြစ်ထိုက်ကြောင်း၊ ကျိုက္ကဆံကွင်းက ပြည်သူလူထု ဝင်ကစားဖို့ အပန်းဖြေဖို့ ချန်ထားရမယ့်နေရာဆိုတာ ကျွန်မပြောဖူးတယ်။ မဖြစ်သင့် မဖြစ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စမို့ ပြောတာပါ။ မြို့ရဲ့လက္ခဏာလို့ ပြောလို့လည်း ရပါတယ်။ ပြည်သူတွေအတွက် အရေးပေါ်နေရာဆိုလည်း ဟုတ်တယ်။ အဲဒီမြေတွေကို သူတို့လုပ်လို့ မရဘူး။ ကျွန်မကတော့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်မှာပဲ။ ဗြိတိန်ကတောင် ထိန်းသိမ်းပြီး ထားခဲ့တဲ့နေရာလေ။ နောက်ပြီး အခုလိုပေးမယ်ဆိုရင်တော့ (ခွင့်ပြုလိုက်မည်ဆိုပါက) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ ကြည့်ရင် ဘယ်လိုမှမညီဘူး။ ကျွန်မတို့က အဲဒါမလုပ်ရင် အစိုးရအဖွဲ့ကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချတဲ့အဆို တင်သွင်းလို့ရတယ်။ ပန်းခြံတွေ ကစားကွင်းတွေကို ကုမ္ပဏီတွေပေးပြီးလုပ်ခိုင်းတဲ့ စီမံကိန်းတွေဟာ ရပ်သင့်နေပြီ။ ဘာမြေမှမပေးတော့ဘဲ ရှိထားတဲ့မြေတွေကိုတောင် ပြန်သိမ်းရမယ့် အနေအထား။ ပြည်သူ့ဥယျာဉ်၊ တိရစ္ဆာန်ရုံ စတာတွေကို ပြည်သူပိုင်မြေအဖြစ် ပြန်တောင်းရတော့မှာပါ။အစိုးရတစ်ရပ်ဟာ ကိုယ်တာဝန်ယူတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ မလုပ်သင့် မလုပ်ထိုက်တာတွေကို လုပ်ခဲ့ရင် နောင်အစိုးရလက်ထက်မှာ ပြန်ပြီးတာဝန်ခံရမှာ။ တာဝန်ယူရမှာပါ”
“အားကစား၊ ပြည်သူ အပန်းဖြေနေရာကလွဲပြီး စီးပွားရေးလုပ်ပစ်မယ်ဆိုရင်တော့ လုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပဲ။ ပြည်သူသိအောင် ဖွင့်ချမယ်။ အားကစားကွင်းတွေက တိုးမလာတဲ့အပြင် ရှိတာတွေပါ ပြန်ဆုတ်ယုတ်ကုန်တယ်။ သိမ်ဖြူကွင်း၊ တောင်ဥက္ကလာကွင်း၊ ရန်ကင်း၊ တာမွေရာပြည့်ကွင်း၊ သင်္ဃန်းကျွန်း အကုန်ဖျက်ပစ်တယ်။ အခု ကျိုက္ကဆံကို လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ လုံးဝကိုလက်မခံဘူး။ အခု လူငယ်တွေဟာ ဆေးလိပ်၊ ကွမ်း၊ အရက်၊ ဘီယာကအစ မူးယစ်ဆေးဝါးအဆုံး ဒါတွေနဲ့ပဲသုံးပြီး ဆုတ်ယုတ်လာတယ်။ လူငယ်တွေ ဒီလိုမဖြစ်ဖို့ အားကစားက အဓိကအရေးပါတယ်။ အားကစားကွင်းတွေထဲ လူငယ်တွေ ရောက်လာအောင် လုပ်ပေးရမှာ။ လုပ်ဖို့အတွက် အားကစားကွင်းတွေ ရှိဖို့လိုတယ်။ အခုက တိုးမလာတဲ့အပြင် ပြန်ဆုတ်ယုတ်နေတယ်။ ကျိုက္ကဆံကွင်းကို အားကစားကွင်း ဒါမှမဟုတ် အများပြည်သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘဲ စီးပွားရေးလုပ်ခွင့် ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ပေးလိုက်တဲ့သူတွေဟာ အဲဒီလူငယ်တွေရဲ့ အနာဂတ်တွေကို ဖျက်ဆီးပစ်တဲ့ သမိုင်းတရားခံတွေပဲ။ ရန်ကုန်မှာ ရှော့ပင်းစင်တာတွေ ဒီလောက်ပေါနေတာ ထပ်ဆောက်ဖို့ လိုသေးလား။ ဒီနေရာမှာဆောက်မှပဲ ရမှာလား။ ကျိုက္ကဆံကွင်းဆိုတာ အမှတ်မမှားဘူးဆိုရင် ၁၉၆၃ ခုနှစ်မှာ မြင်းပြိုင်ကွင်းကို ဖျက်ပြီး လူထု လူတန်းစားအသီးသီး စုဝေးနိုင်တဲ့ကွင်း၊ အားကစားကွင်းအဖြစ် ပြောင်းလိုက်တာ။ ဒီကွင်းထဲမှာပဲ ပြည်ထောင်စုနေ့၊ အလုပ်သမားနေ့၊ တောင်သူလယ်သမားနေ့တွေ ကျင်းပခဲ့တဲ့ သမိုင်းရှိတဲ့ ကွင်း။ အားကစားနဲ့ပတ်သက်တာ၊ အများပြည်သူ အပန်းဖြေတာမျိုးနဲ့ ပတ်သက်တာကလွဲပြီး စီးပွားရေးလုပ်တာ လုံးဝလက်မခံဘူး”
ဦးထင်အောင် (ကာယပညာတက္ကသိုလ်၊ ဂျာမနီ)
အသက် ၉၆ နှစ်အရွယ်ရှိ ဂျာမနီ ကာယပညာတက္ကသိုလ်အထိ သွားရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့သည့် ဆရာဦးထင်အောင်က “အဘ ဒီကိစ္စ ကြားလိုက်တာနဲ့ ရင်ထဲ နင့်ခနဲနေသွားတာပဲ။ ကျိုက္ကဆံကွင်းဟာ သမိုင်းအကြောင်းအရာတွေရှိတဲ့ ကွင်းပါ။ လူထုလူတန်းစားမျိုးစုံ စုဝေးနိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းကျန်တဲ့ကွင်းပါ။ နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ အခမ်းအနားပေါင်းစုံ ကျင်းပခဲ့တဲ့ သမိုင်းဝင်ကွင်းပါ။ အားကစားကွင်းမရှိရင် ဘာဖြစ်မလဲ။ ဥပမာ-ကာယပညာဆရာတွေ မွေးထုတ်ပေးတဲ့ ရန်ကင်းအားကစားကွင်းကိုဖျက်ပြီး အဆောက်အအုံတွေ ဆောက်လိုက်ကြတယ်။ အဲဒီအားကစားကွင်းကဆိုရင် ဆန်နီတင်ထွန်းတို့၊ မောင်အောင်တို့လို မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အားကစားသမားပေါင်းများစွာ ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ကွင်း။ အားကစားကွင်း မရှိတော့ ဘာမှထွက်မလာတော့ဘူး။ အဘအနေနဲ့တော့ အားကစားကွင်းကို ရှော့ပင်းစင်တာ ဆောက်တာမျိုး လုံးဝလက်မခံဘူး ကန့်ကွက်တယ်။ ဒါကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ် အားကစားတိုးတက်မှု၊ အားကစားသမားကောင်းတွေ ပေါ်ထွက်လာမယ့် အခြေခံအုတ်မြစ်တွေကို ရိုက်ချိုးလိုက်တာပဲ။ ပေးတဲ့သူတွေ၊ ရောင်းတဲ့သူတွေဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်တွေကို ရိုက်ချိုးလိုက်တာပဲ”ဟု ပြောကြားသည်။
“ဒီကိစ္စက လုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ လုံးဝ သဘောမတူဘူး။ ရန်ကုန်မှာ အများပြည်သူ စုဝေးနိုင်တဲ့နေရာ၊ အားကစားကွင်းတွေ ရှားနေပြီ။ ပညာရှင်အနေနဲ့ပြောရရင်လည်း Procedure လုံးဝလွဲတဲ့ လုပ်ပုံလုပ်နည်းပါပဲ။ တကယ်ဆို Master Plan ဆွဲရမယ်။ ပညာရှင်အစုအဖွဲ့တွေပါဝင်ပြီး ဆွဲရမှာ။ ပြီးရင် အများပြည်သူကို ချပြရမယ်။ ဥပမာ- လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ပညာရှင်တွေ၊ ပညာရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေက ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးရမယ်။ ဆွေးနွေးပြီးမှ
လုပ်သင့် မလုပ်သင့်ဆိုတာ ထွက်လာမယ်။ လုပ်သင့်တယ်ဆိုမှ ဘယ်လိုလူတွေနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်မယ်၊ တင်ဒါ ဘယ်လိုခေါ်မယ်၊ ဘယ်လိုရွေးချယ်ပြီး လုပ်မယ်ဆိုတာ ဖြစ်ရမှာ။ ဒါပေမဲ့ ကျိုက္ကဆံလိုနေရာမျိုးကတော့ လုံးဝကို မလုပ်သင့်တဲ့နေရာပါ။
ကျွန်တော်တို့ကတော့ သဘောမတူပါဘူး။ အများပြည်သူပိုင်အဖြစ်ထားပြီး အများပြည်သူ လိုအပ်တာမျိုးလုပ်ဖို့အတွက် ထားကိုထားရမှာပါ။ သိမ်ဖြူလိုကွင်းမျိုးတောင် ရမယ်ဆို အများပြည်သူပိုင်အဖြစ် ပြန်ယူရမှာပါ”
ဦးဝင်းကြိုင် (မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်)
“သုံးချက် စဉ်းစားလို့ရပါတယ်။ တစ်အချက် မလုပ်ဘဲဒီအတိုင်းထားရမယ်။ နိုင်ငံတော်အတွက် တကယ်အကျိုးအမြတ်ရှိလို့ လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း တင်ဒါခေါ်ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ချပြပြီးမှ လုပ်ရမယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ ဒီနေရာမှာ ရှော့ပင်းစင်တာတွေ ချက်ချင်းဆောက်ရလောက်အောင် လိုအပ်နေသလား။ မဖြစ်မနေလုပ်မှ
နိုင်ငံအတွက် ဖြစ်မှာလား။ မလိုဘူးဆိုရင် အလျင်အမြန်လုပ်စရာ မလိုဘူး။ နောင်အစိုးရလက်ထက်ရောက်မှ ဆက်လုပ်လည်း ရတာပဲ။ အခုတင်ထားတဲ့အတိုင်း ခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အစိုးရအနေနဲ့ ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာပါ။ မလုပ်ဘဲနဲ့ ချန်ထားတာတော့ အကောင်းဆုံးပါ”
ဦးသန်းမောင် (စစ်တွေ) ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်
“ဒါအများပြည်သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သမိုင်းဝင်ကွင်း၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာ နေရာလပ်တစ်ခုအဖြစ်ပဲ ထားရမယ့်ကွင်းပါ။ ဒါက အရင်ကတည်းက နာမည်ကျော် အားကစားကွင်းနေရာ။ နောက် ခေတ်အဆက်ဆက် လူထုအစည်းအဝေးပွဲတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းဝင်နေရာလည်း ဖြစ်တယ်။ ကျိုက္ကဆံကွင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရင်အစိုးရလက်ထက်မှာလည်း အသံထွက်ခဲ့သေးတယ်။ အရင်အစိုးရ လက်ထက်မှာဆိုရင် လုပ်ချင်ရင် လုပ်ပစ်လိုက်လို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့တောင် မလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့ ထားခဲ့တာ။ ဒီလိုနေရာကို အခုလို လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့
ဒီကိစ္စကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက လွှတ်တော်မှာ အရေးကြီးအဆိုအဖြစ်တောင် တင်သွင်းပြီး မေးမြန်းရှင်းလင်းရမယ့်ကိစ္စပါ”
ဒေါက်တာကျော်လတ် (ရန်ကုန်မြို့ပြ ပညာရှင်)
“အများပြည်သူ အနားယူအပန်းဖြေကြမယ့် နေရာအဖြစ်ပဲ လုပ်သင့်တာပေါ့။ အခု ကျိုက္ကဆံကွင်းကြီးကို ပေးပစ်မယ်ဆိုတာ ခက်တာပေါ့။ မီဒီယာတွေ ရေးကြ၊ ကန့်ကွက်ကြပါ။ ဝန်ကြီးဌာနပိုင်မြေမို့လို့ ထင်ပါတယ်။ မလုပ်သင့်ဘူး။ အခုရန်ကုန်မြို့မှာ Green Area အရမ်းရှားနေတဲ့အချိန်မှာ အခုဆိုလည်းပဲ တရားဝင်လား မဝင်လားမသိဘူး။ အဲဒီထဲမှာ အားကစားလုပ်နေတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိတာပဲ။ မလုပ်သင့်ပါဘူး”
ကိုမြအေး (၈၈ ငြိမ်းပွင့်)
“ရန်ကုန်မြို့မှာ ပြည်သူလူထုရဲ့အပန်းဖြေဖို့ ပန်းခြံဆိုတာ ဘာမှလောက်လောက် လားလားမရှိဘူး။ ဒါကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံနဲ့ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလောက် ရှိပါတယ်။ အခုက ပန်းခြံဆိုရင်လည်း အဆောက်အအုံတွေ တည်ဆောက်။ သိမ်ဖြူကွင်းဆိုရင်လည်း သမိုင်းဆိုင်ရာအရေးကြီးတဲ့ ကွင်းကြီးပဲ။ ကစားကွင်းတစ်ခုလို့လဲပြောလို့မရဘူးဗျ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လူထုစည်းဝေးပွဲနေရာ ပြောလို့ရတယ်ဗျ။ အခုဒီမှာလည်း ကွန်ဒိုတွေဖြစ်နေပြီဗျ။ ကျိုက္ကဆံကွင်းကိုလည်း အခုလိုလုပ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ကတော့ သဘောမတူဘူးဗျ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံမျိုး လုပ်တယ်ဆိုလည်း တစ်မျိုးဗျာ။ အခုက လက်သိပ်ထိုးပြီး တင်ဒါမခေါ်ဘဲ ပေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့။ သိပ်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဗျာ။ အားကစားနဲ့မပတ်သက်ဘဲနဲ့ ကျန်တာဟာ လုပ်တာကိုက ရန်ကုန်မြို့မှာနေတဲ့ လူထုရဲ့မွန်းကျပ်နေမှုတွေကို ထည့်စဉ်းစားပါ။ အားကစားတွေလုပ်ဖို့ ကွင်းတွေဘာတွေ ထားရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဒီလုပ်ရပ်ကို မကြိုက်ဘူးဗျာ။ သဘောမတူဘူး။ အစိုးရရဲ့ပုံစံက လက်သိပ်ထိုး စီးပွားရေးတစ်ခုထဲပဲလုပ်မယ်ဆိုရင် ဘာအဓိပ္ပာယ်မှ မရှိဘူး။ ဒါကတော့ တစ်ပိုင်းပေါ့ နောက်တစ်ခုက အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက် ကန့်ကွက်ဖို့အတွက် စဉ်းစားမှာပါ။ဆောက်သင့်တဲ့နေရာမှာ ဆောက်တာကို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဘာမှကန့်ကွက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုက အစိုးရရဲ့ ချမှတ်ထားတဲ့ စီးပွားရေးမူဝါဒနဲ့ လည်း ပြောင်းပြန်ကြီး ဖြစ်နေတယ်လေ”
“ကျိုက္ကဆံကွင်းဆိုတာ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က မြင်းပြိုင်ကွင်းပေါ့။ မြင်းပြိုင်ကွင်းဆိုတာ ဟိုခေတ်ဟိုအခါရဲ့ အထိမ်းအမှတ်နေရာ တစ်ခုပေါ့။ နောက် တော်လှန်ရေးကောင်စီတက်တော့ ဒီနေရာက အလုပ်သမား လယ်သမား ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားတွေ ကျင်းပခဲ့တဲ့ နေရာပေါ့။ လူထုလူတန်းစား၊ အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ အခမ်းအနားကြီးတွေကို ရန်ကုန်မြို့မှာ ဒီနေရာမှာ ကျင်းပခဲ့တာ။ နောက်ဆုံး တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်ပိုင်းမှာ ပြောရင်လည်း ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ ပဏာမ ခင်းကျင်းတဲ့အခင်းအကျင်းဟာလည်း ဒီကျိုက္ကဆံကွင်းမှာပဲ။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်က ကျင်းပခဲ့တော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကျိုက္ကဆံကွင်းမှာ ကျင်းပတဲ့ အမျိုးသားညီလာခံကို တက်ရောက်ခဲ့တာပေါ့။ ဒါ့ကြောင့် ကျိုက္ကဆံကွင်းက ကိုလိုနီခေတ်ကနေ တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ်အထိ လက်ရှိ တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်မှာလည်း တစ်စုံတစ်ရာ သမိုင်းမှတ်တိုင်၊ ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွှယ်နေတဲ့ နေရာဖြစ်တယ်။ ဒီကွင်းကြီးက သမိုင်းအငွေ့အသက်ရှိတဲ့အတွက်
ပုဂ္ဂလိက လက်ဝယ်ကို ထားမယ့်အစား အများပြည်သူအတွက် ထိန်းသိမ်းသင့်တယ်။ အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားအတွက် မလုပ်ဘဲ ကိုယ့်အတွက်လုပ်မယ်ဆိုရင် သမိုင်းတရားခံဖြစ်မှာပဲ”
ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင် (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်)
“ ဒီလို သမိုင်းဝင် အရေးပါတဲ့နေရာကို ရောင်းစားတာ၊ လွှဲပြောင်းတာ မဖြစ်စေချင်ဘူး။ အစမှာတော့ အများပြည်သူအတွက်ဆိုပြီး လုပ်ကြမှာပဲ။ အဲဒီလိုပြောပြီး လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း ပြည်သူကို အသိမပေးဘဲ မလုပ်သင့်ဘူး။ ပြည်သူကို အရင်ပြောသင့်တယ်။ နိုင်ငံတကာစီမံကိန်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူသဘောမတူရင် မလုပ်သင့်ဘူး။ ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့လည်း ညီမှာမဟုတ်ဘူး”
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅၁ မှာ “တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရသည် ပြည်ထောင်စု အစိုးရက ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများနှင့်သော် လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုဥပဒေများနှင့်သော်လည်းကောင်း မဆန့်ကျင်စေဘဲ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စီမံကိန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည်” လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အစိုးရသစ်တာဝန်ယူတဲ့ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဧပြီ ၁ ရက်က စပြီး ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် မတ် ၃၁ ရက်အတွင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတကစပြီး တာဝန်ရှိသူ အားလုံးဟာ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာတွေအတွက် နောက်အစိုးရလက်ထက်ရောက်လည်း တာဝန်ယူကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု ရန်ကုန်မြို့မှာ အများပြည်သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ မြေကွက်တွေကို စီမံကိန်းပေါင်းများစွာခေါင်းစဉ်နဲ့ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေလက်ထဲအပ်ခဲ့တာ အများအပြားပါ။
အဲဒီလို ချထားပေးတာဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ မညီဘူး၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့ မညီဘူးဆိုရင် ခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့သူတွေဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင် တာဝန်ပြန်ယူကြရမယ်၊ ရှင်းလင်းကြရမှာပါ။
ပေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း ပေးချင်တိုင်း ပေးလို့မရတာတွေ ရှိပါတယ်။ အခုသမိုင်းဝင် ကျိုက္ကဆံကွင်းဟာ ပြည်သူအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ကွင်းဖြစ်လို့ ပေးကိုပေးလို့ မရတဲ့နေရာ၊ မပေးဘဲ ထိန်းသိမ်းထားရမယ့် နေရာပါ။
အစိုးရသစ်အနေနဲ့ သက်တမ်း တစ်နှစ်ဝန်းကျင်ပဲ ကျန်တယ်။ အများနဲ့ဆိုင်တဲ့ မြေကွက်တွေလည်း အစိုးရလက်ထဲမှာ မကျန်သလောက် ဖြစ်လာပြီ။ လက်ကျန် တစ်နှစ်ဝန်းကျင်အတွင်းမှာ ရသလောက် ထိုးပေးသွားဦးမလား၊ ချန်ထားပေးခဲ့မလား၊ ထိုးပေးပေး ချန်ထားထား ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၅၁ ကတော့ ရှိနေဦးမှာဖြစ်သလိုနောက် အစိုးရလက်ထက်အထိ ပေးခဲ့တဲ့သူတွေပဲ တာဝန်ခံရမှာပါ။ . Credit : Eleven Media Group
သပိတ်ကြီးမှာ ပြည်သူတွေအားလုံး ပါဝင်ဖို့ ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်က ကိုကျော်ကိုကို တိုက်တွန်း
Photo News: (Kyaw Ko Ko Gives Speech in Yaynanchaung)
ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်က ကိုကျော်ကိုကိုက ကျောင်းသားသမဂ္ဂကို အသိအမှတ်မပြုတဲ့ မြန်မာအစိုးရကို ရှုတ်ချတဲ့အကြောင်း၊ ပိုမိုကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ သပိတ်ကြီးမှာ ပြည်သူတွေအားလုံး ပါဝင်ဖို့ ရေနံချောင်းမြို့မှာ ဒီကနေ့ညနေက တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
(ဓာတ်ပုံ - အာကာစိုး/ကမာရွတ်မီဒီယာ)
ပြင်ဦးလွင်က မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ မြေသိမ်းတိုက်ပွဲ
ပြင်ဦးလွင်က မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ မြေသိမ်းတိုက်ပွဲ.... ပြည်သူတွေလည်း...သနားစရာဖြစ်ကုန်ပြီ.....
ပြင်ဦးလွင်မြို့ ၇ဲ့ ဂုဏ်ဆောင် သူရဲကောင်းများ။ပြည်သူတွေကိုဒီလို သတ္တိပြခဲ့ တယ်......
ပြန်လည်မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်.. ..
၄ ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲ အချို့အချက်များ မပြေလည်၊
အစိုးရ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကျောင်းသား သမဂ္ဂများနှင့် ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကွန်ယက် (NNER) တို့ အမျိုးသားပညားရေး ဥပဒေမူကြမ်း ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိန်ရတု ခန်းမတွင် ဆွေးနွေးလျက်ရှိရာ ကျောင်းသားများက မူလဆွေးနွေးရန် တောင်းဆိုထားသည့် အချက် ၁၁ချက်ကို မဆွေးနွေးမီ အကြို Pre-condition ၉ ချက်ကို ဆွေးနွေးရန် တောင်းဆိုပြီး ယင်း ၉ ချက်ကို အကြိုဆွေးနွေးရာ သုံးချက်သာ အောင်အောင်မြင်မြင် ဆွေးနွေးနိုင်သေးသည်။
နံပါတ် ၄ အချက်ဖြစ်သည့် "သဘောတူညီမှုသည် ကျောင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များ၏ သဘောတူညီမှုကို အခြေခံရမည်" ဟူသည့် အချက်ကို ခေတ္တ ကျော်၍ နံပါတ် ၅ အချက်ဖြစ်သည့် "လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းထားသော ကျောင်းသားဆရာ သမဂ္ဂများ၏ တရားဝင်မှုကို လေးစားစွာ အသိအမှတ်ပြုရမည်" ဆိုသည့် အချက်ကိုလည်း မကျေလည်သေးဘဲ ထမင်းစားချိန် ရပ်နားခဲ့သည်။
ယင်းသို့ ဆွေးနွေးနေသည့် နေ့၌ပင် အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသည့် မန္တလေးကျောင်းသားသပိတ်စစ်ကြောင်း မကွေးတိုင်း ချောက်မြို့နယ် စွယ်ပေါက်ကံအုပ်စု၊ ထန်းခြောက်ပင်ကျေးရွာရှိ ထန်းခြောက်ပင် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ခေတ္တတည်းခိုနေရာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဒေသအာဏာပိုင်များက ဖိအားပေး ပြောင်းရွှေ့ခိုင်း၍ ရေနံချောင်းမြို့ အိုးဘိုရပ်ကွက် စံပယ်ရုံ ကျောင်းတိုက်သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ရသည်ဟု ထိုနေရာတွင် သတင်းယူနေသည့် မဇ္ဈိမသတင်းထောက် ကိုအောင်ကိုဦးက သတင်းပေးပို့သည်။
မြန်မာပြည်ခါးလယ်ကို စလွယ်သိုင်းဖြတ်ပိုင်းထားတဲ့ ရေနံပိုက်လိုင်းကြီးကနေ တရုတ်ကို ရေနံစိမ်းပို့လို့ရမယ့် မဒဲ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းကို အကြိုဖွင့်လိုက်ပါပြီ။ တစ်နေ့ နှစ်ထောင်လောက်တယ်ပြောတဲ့ ဥာဏ်ထွန်းကတော့ စွမ်းအင်ကရှယ်ယာပါတဲ့အကြောင်း မီးလောင် ရေနံဖိတ်စတဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဘေးအန္တရာယ်တွေ ကျွန်တော်တို့ရေကြောင်းဆရာပြောတဲ့ လူလုပ်ကပ်ဘေးပေါ့ဗျာ… အဲဒီအတွက် ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ တရုတ်အတွက်သာမက ပြည်တွင်သုံးအတွက်ပါ ပါတယ်လို့ မရေမရာ ပြောသွားပါတယ်။ ဒေသခံတွေအတွက် ဆေးရုံတွေ ကျောင်းတွေနဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေ ဖန်တီးပေးခဲ့တာကိုလည်း တခုတ်တရ ပြောသွားပါသေးတယ်။
တန်ချိန်သုံးသိန်းအထိရှိတဲ့ တန်ကာကြီးတွေ ဝင်ထွက်ဆိုက်ကပ်နိုင်တဲ့ ဆိပ်ကမ်းတစ်ခု ရှိလာတာမို့ တိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းတယ်လို့ ထင်စရာရှိပါတယ်။
ဒေသခံတွေကိုသာ ထိုက်တန်တဲ့လျော်ကြေးပေးမယ် တကယ်ဦးစားပေးအလုပ်ခန့်ထားမယ် ဆိပ်ကမ်းကြီးရဲ့ စီမံခန့်ခွဲခွင့် အစိုးရလက်ထဲတကယ်ရှိမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံအတွက် ဝမ်းသာစရာပဲ။ ဒါပေမယ့် အနှစ်သုံးဆယ် BOT စာချုပ်မှာ မြေငှားအဆင့်သာသာနဲ့တော့ ဘာမှလုပ်ပိုင့်ခွင့်မရှိတာ သေချာသလောက်ပါပဲ။
ရေနံထွက်တဲ့ အာရပ်နိုင်ငံတွေကနေ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ ကပ္ပလီပင်လယ် တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွေကို ဖြတ်စရာမလိုတော့ဘဲ တရုတ်ကို ရေနံပိုက်လိုင်းကနေ တိုက်ရိုက်တင်ပို့လို့ရတော့မှာမို့ အချိန်ကုန်သက်သာ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာ ဘေးရန်လည်းကင်း ရေနံဖိတ်ယိုရင်တောင် တရုတ်ပင်လယ် တရုတ်ဆိပ်ကမ်းမှာ မဖြစ်တော့ပါဘူး။ တကယ်အကျိုးအမြတ်ထွက်တာက တရုတ်ပါ။ ဆိပ်ကမ်းက တိုင်းပြည်ရဲ့ အခြေခံ အဆောက်အဦးပဲမို့ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့် ရေနံကို အဖြူရရ အမဲရရ လိုအပ်နေတဲ့တရုတ်ကို ခုလို အမြတ်ထုတ်ခွင့်ပေးမယ့်အစား တရုတ်မဟုတ်တဲ့ တခြားနိုင်ငံတစ်ခုခုနဲ့ ဒီလို စီမံကိန်းမျိုးကို လုပ်နိုင်ခဲ့ရင် ကိုယ့်လက်ထဲ စီမံခွင့်နဲ့ နည်းပညာရမှာပါ။ ရေတောင်ဝယ်သုံးနေရတဲ့ စကာင်္ပူဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ အချက်အချာကျတာကို အသုံးချပြီး ရေနံချက်စက်ရုံကြီးတွေကို သူ့ဆီမှာတည်ထားပါတယ်။ အဆင့်မီတဲ့ သဘာဝဝန်းကျင် ကာကွယ်မှုတွေနဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းကရေနံကို သူ့ဆီသယ် သူ့ဆီမှာချက်ပြီး ပြန်ရောင်းပါတယ်။ ကော်ဇောနီခင်းကြိုပြီး ညစာစားပွဲမှာတဟီးဟီးနဲ့ ပိုက်လိုင်းသွယ်မရောင်းပါဘူး။
တရုတ်ကို ကြောက်နေရမယ့် အောင်မင်းလို အစိုးရဝန်ကြီးလည်း စလုံးအစိုးရအဖွဲ့ထဲ စောက်ဆံအကုန်ခံပြီး တာဝန်ပေးမထားပါဘူး။ ဒီလို ကိုယ့်နိုင်ငံအချက်အချာကျတာကိုကိုင်ပြီး ပွဲစား ကုန်သည်လုပ်ပြီး ငှက်ပျောတောထူနေတဲ့ ကျွန်းသာသာဘဝကနေ စကာင်္ပူ ချမ်းသာသွားတာပါ။ လက်တွေ့ခန်းမဝင်ရဘဲ ဘွဲ့အစုတ်ပလုတ်ရခဲ့တဲ့ ခပ်ချာချာ သဘောင်္သားတစ်ယောက်က ဒီလိုတွေးတတ်သေးရင် ခေတ်မီနည်းပညာတွေ စီမံပညာတွေသင်ခဲ့ရတဲ့ စစ်ရေးအမြင် ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေးနဲ့ မဟာဗျူဟာအမြင်တွေ အပြည့်တတ်ထားကြတဲ ပြင်ဦးလွင်ဆင်းတွေ
မသိဘဲ မတွေးတတ်ဘဲ နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ အန္တရာယ်များလွန်းတဲ့ စလွယ်သိုင်း ခါးလည်ပိုင်းထားတဲ့ ပိုက်လိုင်းကြီးကို တင်ဒါမခေါ် အပြိုင်မရှိ ခပ်လွယ်လွယ် ဘာလို့ခွင့်ပြုခဲ့ကြတာပါလဲ။ နေ့မအား
ညမနား မအားလပ်တဲ့ကြားက လစာလေးနှစ်ပဲတပြားနဲ့ ဘီလျံနာဖြစ်အောင် စီးပွါးအရှာကောင်းခဲ့ကြလေတော့ စီးပွါးရေးအမြင် အရမ်းကောင်း လန်ထွက်အောင် ကောင်းလွန်းခဲ့ကြတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုးတက်ချမ်းသာဖို့ အစိုးရကောင်းကောင်းပဲလိုတာပါဗျာ...။ လူလုပ်တဲ့ကပ်ဘေးဖြစ်လာတဲ့အခါ ကိုတရုတ်ကြီးဆီက ပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့ ကရုဏာကြေး အတိုးနဲ့ငွေပြန်ချေး ပိုက်လိုင်းလုံခြုံရေးအတွက် တပ်နီတော်ကြီးဝင်လာတဲ့အခါ အပြေးအလွှားအလေးပြုကြတာပေါ့ဗျာ။ ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကို အရှုပ်ထုပ်တွေ အဖျက်အမှောင့်တွေလို့မြင်နေတဲ့ ဥာဏ်ကြီးရှင်တစ်ယောက်ကတော့ ဧရာဝတီမှာ အစိုးရက အလျော့ပေးလိုက်ရတာကို ရည်ညွှန်းပြီး လက်ပံတောင်းဆန္ဒပြသူတွေကို.. ပထမပစ်မှတ် မြစ်ဆုံ ဒုတိယပစ်မှတ် လက်ပံတောင်း ဒါဆို ဒုတိယပွဲ အနိုင်ရင် တတိယပစ်မှတ်က ပိုက်လိုင်းလား ရေနက်ဆိပ်ကမ်းလား... တဲ့..။
ဟုတ်ကဲ့ ။ သိပ်စိတ်ပူမနေပါနဲ့တော့ ခင်ဗျာ.,။ တကယ်က ပြည်သူတွေ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ခုခံကာကွယ် ဆန့်ကျင်နေကြတဲ့ကြားက တိုင်းပြည် ချမ်းသာကြီးပွါးနိုင်တာတွေဟာ စစ်အာဏာရှင်ကြီးတွေရဲ့ စီမံချက်အတိုင်း ပေါပေါလောလောနဲ့... သုံးခုလုံး ပါသွားပါပြီ ခင်ဗျာ..။ ____________________ Thein Min Win ရေးသည်။
Like · at
“The Plunder of Myanmar” တရုတ်နိုင်ငံ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝ သယံဇာတ အရင်းအမြစ်များ ကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ကာ အတင်း အဓမ္မ ခိုးယူ လုယက်၊ အမြတ်ထုတ်ယူနေတယ်လို့ “The Plunder of Myanmar” ခေါင်းစဉ် ဖြင့် နယူးယောက်တိုင်းမ် သတင်းစာ အယ်ဒီတာအာဘော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ မှာ အခုလိုရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံ ခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ Hua Chunying က တော့ နယူးယောက်တိုင်းမ် ၏ ရေးသားဖော်ပြချက်သည် တရုတ်- မြန်မာ ဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်မှု ဖြစ်စေရန် သွေးထိုး လှုံ့ဆော်ရေးသား မှုဖြစ်သည်ဟု ပြန်လည် တုံ့ပြန် ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ က မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝ သယံဇာတ အရင်းအမြစ်များ ကို ဘယ်လို လက်ဝါးကြီးအုပ်ကာ၊ ဘာတွေ ကို အတင်း အဓမ္မ ခိုးယူ လုယက် အမြတ်ထုတ်ယူနေသလဲဆိုတာကို သိချင်ရင်တော့ ဆောင်းပါးထဲမှာ အသေးစိတ်ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
The Plunder of Myanmar
By THE EDITORIAL BOARD JAN. 23, 2015 China’s
exploding appetites have unleashedawholesale looting of Myanmar’s valuable natural resources. While this often involves outright theft, it
also comes in the form of crony capitalism. Myanmar’s military elite has deals with Chinese companies that are eager to exploit the land, with little concern for the environment or people. The Kachin Independence Army,arebel group that controls part of northeastern Myanmar, also takesacut of some of this trade with China, especially jade hacked out of the earth by impoverished, heroin-addicted laborers.
week, Chinese government officials were in Myanmar to investigate the detention of Chinese citizens suspected of illegal logging. Illegal timber sales to China, especially of Myanmar’s dwindling stocks of rosewood, have beenabig problem, with the Environmental Investigation Agency,anongovernmental group, warning that the trees could be extinct
within three years.
insatiable demand for tiger and leopard parts, bear bile and pangolins has helped to transform the town of Mong La, near the Chinese border, intoaseedy center of animal trafficking, prostitution and gambling. Myanmar’s tiger population is by most estimates less than 70.
pursuit of the valuable copper deposits in the country, formerly called
Burma, has led to violence against Burmese who dare to object to the environmental and human costs. In 2012, the Myanmar police apparently used white phosphorus smoke bombs, usually reserved for warfare, to quell protesters angry over evictions to make room for the Letpadaung copper mine in central Myanmar,ajoint venture between China’s Wanbao Mining company and the Myanmar military’s business arm. Last month, police officers opened fire on residents who were protesting evictions in the area, killing one woman withashot to the head.
people of Myanmar — as the protests make clear — want this plunder stopped. The country needs foreign investment that is respectful of human rights and the environment. It will be up to President Thein Sein to rein in the corruption and crony deals that are stripping away resources and creating political instability.
အစိုးရ ၀န်ကြီး ကတော်များက ကျောင်းသူများကို အသုံးချ၍ အပမ်းဖြေနေကြ
ဇန်နာဝရီလ (၂၉)ရက် ၂၀၀၁၅ ခုနှစ်
မြန်မာပြည်၏ တောင်ဘက်အစွန်စုံးဒေသဖြစ်သော လူသိထင်ရှားကျော်ကြားသည့်
မူးယစ်ရာဇာများ နှင့် မာဖီးယား ဂိုဏ်းများ အမြဲတစေ လာရောက် အပမ်းဖြေလေ့ရှိသော သူဌေးကျွန်းသို့ ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီခန့်တွင် တပ်မတော် ဇိမ်ခံ စစ်ရေယာဉ်ဖြင့် ကော့သောင်းမှ ရေမိုင် တစ်မိုင် ကျော်သာသာ ကလေးမျှသာဝေးသော အဆိုပါကျွန်းသို့ နိုင်ငံတော် ၀န်ကြီများ၏ ကတော် (၁၈) ဦးထက်မနည်း ရောက်ရှိလာသည်။
ကျွန်းပေါ်ရှိ အလုပ်သမားများ၏ လက်ကိုင်ဖုန်း ကင်မရာများကို လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက အားလုံးသိမ်းဆီးထားပြီး အဆိုပါ ၀န်ကတော်များ ပြန်သွားကြပြီးမှပင် ပြန်လည် ပေးအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ၀န်ကတောများအတွက် ကော့သောင်းမြို့ပေါ်မှ သူခေါ်ရင် အ.ထ.က ၁ နှင့် အဏ္ဏဝါ ကျောင်းမှ ကျောင်းသူလေးများ (၃၅) ဦးအား တပ်မတော်ရေယာဉ်ဖြင့် ခေါ်ဆောင်သွားပြီး အဆိုပါ ၀န်ကတော်များ နားနေချိန်တွင် ဖျော်ဖြေရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စမျာကို အသုံးတော်ခံ တင်ဆက်ပေးနေရကြောင်းနှင့် အခကြေးငွေ တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မရပဲ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ကော့သောင်း ပညာရေးမှူးမှ ယခု လိုက်ပါ၍ ဖျော်ဖြေပေးနေကြသော ခလေးများအား မည်သို့အနေထားနှင့် ဖြစ်စေ အားလုံး စာပေးပွဲ အောင်သွားအောင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟုလည်း သိရသည်။
အဆိုပါ ၀န်ကတော်များသည် သူဌေးကျွန်းပေါ်တွင် ၂၉ ရက် ညနေခင်း တခုတည်းမှာပင် ၀န်ကတော်များမှ ဒေသထွက် ပုလဲများနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှ တင်သွင်းလာသော အလှတန်ဆာများအား ကျပ်သိန်းပေါင်း (၇၀၀၀) ဖို့ ၀ယ်ယူကြောင်း သိရပြီး ညဖက်များတွင်လည်း ၄င်းတို့အတွက် သီးသန့် စီစဉ်ပေးထားသော ခန်းမဆောင်တွင် ကျောင်းသူလေးများမှ အမျိုးမျိုးသော တင်ဆက်ကပြမှုများအား ပြုလုပ်နေပေးရကြောင်းသိရသည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီပညာရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွင် နိုင်ငံအ၀ှမ်းမှ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ သပိတ် စစ်ကြောင်းများဖြင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ချီတက်တောင်းဆိုနေချိန်တွင် ထိုကဲ့သို့ ၀န်ကြီးကတော်များ လာရောက်၍ ကျောင်းသူကလေးများအား လုပ်အားခ မပေးပဲ ဆောင်ရွက်နေခိုင်းမှုသည် ကျောင်းသားများအား ယာတြာချေတာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း….သိရပါတယ်…………
ဂိုလ်ရှယ်လေး ထူးခြား ဖြစ်စဉ်များရှိလာလျင် ဆက်လက် တင်ပြပေးပါမည်
လက်ပံတောင်းဒေသတွင် လွှင့်တင်ထားသော တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံတော် အလံများ သံတောင်သတ္တုတွင်းမှ လွှင့်တင်ထားသော ကိုရီးယားနှင့် အခြား အမည်မသိ အလံတော်များ ချင်းတောင်တန် တလျောက်တွင် လွှင့်တင်ထားသော တရုတ်နိုင်ငံအလံများ
ကိုကိုကျွန်းတွင် လွှင့်တင်ထားသော တရုတ် အလံများ ရတနာ နှင့် ရွှေဂစ်တို့တွင်
လွှင့်တင်ထားသော တိုင်းတစ်ပါးအလံများ စသောစသော အလံများကိုလည်း အမြန်ဖြုတ်ချခိုင်းပြီး မဖြုတ်ချပါက တရားစွဲမယ် ချေမှုန်းမယ် at
လက်ပံတောင်း ( အရေးပေါ် ဖြစ်နေပြီ) ၀ိုင်းဝန်းပေးကြပါ ဆည်တည်းရွာတောင်ဘက်အခြမ်းကို လုံထိန်းရဲအင်အား သုံး၍ အကြမ်းဖက်အနိုင်ကျင့်ပြီးခြံစည်းရိုး ခတ်ရန် အာဏာပိုင်တို့ ရောက်ရှိလာသည့်အတွက် ရွာသားများ တားမြစ်ကန့်ကွက်ရန် တစ်ရွာလုံးရှိလူကုန် ထွက် နေကြပြီ။
ဆည်တည်းအရေးပေါ်အခြေအနေ Ko Han Win Aung Just now
ဖေစ်ဘုတ် ကြားဖြတ်သတင်း အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအရှေ့ ဖက်အခြမ်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ှနှင်းမုန် တိုင်းကြောင့် ဖေစ်ဘုတ်ရှာ ဗာ ရပ်ဆိုင်းသွား ပါတယ်။ ကျောင်သားလှုပ်ရှားမှုကို ဖေစ်ဘုတ်ပေါ်တွင် မတွေ့ နိင်တော့ပါ။ ကျနော်တို့ ဘလောက်မှာ အတတ်နိင်ဆုံးသတင်းများကိုဖေါ်ပြပေးပါမယ်။ at
လက်ပတောင်း အတွက် သီချင်း Post by Aung Ko.
ယူရေနီယံ နဲ တေဇ ( ဒေါက် ခင်မောင်ညို ရေးသည်။ ) Eleven Media Group
ယူရေနီယံ - တကယ်လား အိပ်မက်လား
Written by - ဒေါက်တာခင်မောင်ညို
“ကိုဘသစ်ရေ၊ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်က ယူရေနီယံသတ္တု တွေ့ရှိတယ်လို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေ လုပ်တာကို တွေ့ရတယ်။ ယူရေနီယံဆိုတာ ဘာလဲ။ ဒါကိုတွေ့တာ အတော်အရေးကြီးလား ဆိုတာကို ပြောပြပေးပါဦး”
“ယူရေနီယံကို သင်္ကေတ U (symbol U) နဲ့ ဖော်ပြထားတယ်။ ဓာတုဗေဒအနေနဲ့ ကြည့်ရင် ယူရေနီယံဟာ အင်မတန် ဓာတ်ပြုအားကောင်းပြီး အဏုမြူသတ္တိကြွ (radio-active) သတ္တုပင်ဖြစ်သော်လည်း သဘာဝမှာ တစ်ခါတစ်ရဖူးမှ သတ္တုအနေနဲ့ မတွေ့ရပါဘူး”
“ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး ကိုဘသစ်။ အဲဒီလုပ်ငန်းရှင်ပြောတာကို ရေးထားတဲ့ သတင်းစာတစ်ခုက သတ္တုတုံးတွေလို့ ပြောတယ်”
“တစ်ခုခုလွဲနေတာပါ။ ယူရေနီယံပါတဲ့ ကျောက်တုံးကို ပြောတာဖြစ်မှာပါ။ ဥမနကို ပြောတာနေမှာပါ။ ဥမနကို မြန်မာပြန်တော့ သတ္တုရိုင်းလို့ ပြန်တာကိုး။ ယူရေနီယံဟာ ဓာတ်ပြုအား အင်မတန်ကောင်းတယ်။ သတ္တုဘဝမှာ အမှုန့်လေးတွေအဖြစ် လေသလပ်ထားရင် သူ့ဘာသာသူ မီးလောင်သွားတယ်”
“မီးလောင်ရင် အောက်ဆိုက်ဖြစ်သွားတယ်။ သဘာဝမှာ သတ္တုအောက်ဆိုက် ဖြစ်နေတာပေါ့”
“ဟုတ်ပါတယ်။ အောက်ဆိုက်၊ ဒါမှမဟုတ် ဆာလဖိုက်လည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်”
“ဆိုရင် ပြည်သူတွေနားလည်ရအောင် ယူရေနီယံအကြောင်း ပြောပြပေးပါဦး”
“ပထမရှင်းရရင်ရဲ့ အက်တမ်အမှတ်စဉ် မှာ ၉၂ ဖြစ်တယ်။ ဆိုလိုတာက သူ့မှာ ပရိုတွန် ၉၂လုံးနဲ့ အီလက်ထရွန် ၉၂ လုံးပါဝင်တယ်။ ခင်ဗျားတို့သိတဲ့ ဟိုက်ဒရိုဂျင်မှာ ပရိုတွန်တစ်လုံး အီလက်ထရွန်တစ်လုံးပဲ ပါဝင်တယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ကိုအက်တမ် အမှတ်စဉ် (၁)လို့ ပေးထားတယ်။ ဓာတုဗေဒပညာမှာတော့ ယူရေနီယံကို အင်တီနိုက်အုပ်စုထဲမှာ ထည့်ဝင်ထားပါတယ်။ အလှည့်မှန်ဇယား (Periodic Table) မှာ လေ့လာနိုင်တယ်”
“သူဟာ တကယ်ပဲ အင်မတန်တန်ဖိုး ရှိတာလားဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်”
“ယူရေနီယံဟာ တစ်ပေါင်ကို ၁၄၉ ဒေါ်လာရှိတယ်”
“ဒါဆိုရင် အရမ်းတန်ဖိုးကြီးတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ရွှေက တစ်အောင်စကို ဒေါ်လာ ၁၂ဝဝ ဝန်းကျင်ဈေးရှိတာပဲ”
“ဟုတ်ပါတယ်။ ယူရေနီယံ တစ်ပေါင် ဆိုတာ ၁၆ အောင်စ ရှိတာပဲပေါ့။ တစ်အောင်စကို ၁ဝ ဒေါ်လာမပြည့်ဘူး”
“ဘယ်နေရာမှာ အဓိကသုံးတာလဲ ကိုဘသစ်”
“သူ့ကို အဏုမြူဓာတ်ပေါင်းဖိုတွေမှာ အဓိကလောင်စာ (mainfuel) အနေနဲ့ အသုံးပြုတယ်။ အဲဒီကနေတစ်ဆင့်ရတဲ့ ပလူတိုနီယံလိုကျတော့ အဏုမြူဗုံး လုပ်လို့ရတယ်”
“အဏုမြူဓာတ်ပေါင်းဖိုဆိုတာ လျှပ်စစ်ဓာတ်ထုတ်ပေးတဲ့ စက်ရုံ (Generator) တွေပဲ မဟုတ်လား”
ကိုဘသစ်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ပင်ဆီဗေးနီးယား (Pennsylvania) တွင် ပထမဆုံး တည်ထောင်ခဲ့သည့် ဓာတ်ပေါင်းဖိုကို စာအုပ်ထဲမှ ကျွန်တော့်အားပြသည်။
“အဲဒီစက်ရုံက လျှပ်စစ်ဓာတ် (60,000 kw) ကိုထုတ်တယ်။ ဒီပမာဏ လျှပ်စစ်ဓာတ် ထုတ်ဖို့ တစ်လကို ကျောက်မီးသွေး ပေါင်သန်း(၄ဝ) လိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယူရေနီယံ ၁၅ ပေါင်ပဲလိုတယ်”
“တယ်ဟုတ်ပါလား။ ကျွန်တော်တို့ဆီ အဆင်ပြေတာပေါ့”
“ဒီလိုလည်း မဟုတ်သေးဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း သဘာဝယူရေနီယံမှာ uranium-238 နဲ့ uranium- 235 တို့ ရောပြီးပါနေတယ်။ အဏုမြူသတ္တုကြွတာက uranium-235 ပဲ။ သူက လောင်စာလုပ်ဖို့ အသုံးဝင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဟာသဘာဝယူရေနီယံမှာ အတော်နည်းနည်းပဲ ပါဝင်တယ်။ သူ့ကိုများလာအောင် လုပ်ရတာ အတော်ခက်တယ်”
“သူတို့ဟာ ဓာတုဗေဒဂုဏ်သတ္တိတွေ အားလုံးတူတော့ သူတို့ကို ဓာတုဗေဒနည်းအရ ခွဲထုတ်လို့မရဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင် ရာနည်းဖြစ်တဲ့ ဗဟိုခွာအားနည်းနဲ့ သုံးချင်သုံး ဒါမှမဟုတ် Diffusion နည်းနဲ့ သုံးရတယ်။ အရင်ခေတ်ကတော့ Diffusion နည်းကို အသုံးများတယ်။ ဒါဟာ စိတ်ရှည်သည်းခံရတဲ့ နည်းပါပဲ။ Diffusion နည်းနဲ့လုပ်ရင် Diffusion Plant ဆိုတဲ့ စက်ရုံဟာ မိုင် ၂ဝ လောက် ရှည်လျားရတယ်”
“ဟုတ်ပါတယ်။ ၁၉၈ဝ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်မှာ ပါကစ္စတန်မှာ အဏုမြူဗုံးလုပ်မယ် သတင်းကြားတော့ စီအိုင်အေစတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတွေက ဂြိုဟ်တုကနေကြည့်တော့ တောင်တန်းတွေအကြားမှာ Diffusion Plant ကိုတွေ့တယ်။ ဒီအကြောင်းကို အနောက်တိုင်း သတင်းစာတွေက ရေးတာဖတ်ဖူးတယ်။ နောက်ငါးနှစ်ဝန်းကျင်မှာ ပါကစ္စတန်က အဏုမြူဗုံးလုပ်နိုင်တော့မယ်လို့ ခန့်မှန်းကြတယ်”
“သူတို့ခန့်မှန်းတဲ့အတိုင်း ဖြစ်လာတာပဲ ပေါ့ဟုတ်လား”
“ဟုတ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဗဟိုခွာအားနည်းကို Diffusion နည်းနဲ့ တွဲသုံးလာကြတယ်။ အီရန်မှာ Diffusion လုပ်ဖို့ လိုဏ်ဂူတွေထဲမှာ စက်ရုံဆောက်တော့ ဂြိုဟ်တုက မမြင်ရတော့ဘူးပေါ့”
“ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာလည်း နေပြည်တော်ဝန်းကျင်မှာ လိုဏ်ဂူတွေတူးတာဟာ ဒီလို Diffusion နည်းနဲ့ လုပ်ဖို့ပဲလား”
“ဒါကို အချို့ အနောက်တိုင်း သတင်းစာတွေက ရေးတာကို ဖတ်ဖူးတယ်”
“မရေးဘူး။ နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုရေးရင် ထောင်ကျကုန်မှာပေါ့။ နောက်ပြီးတို့က သေသေချာချာလည်း မသိဘူး”
“ဒါဆို ဟိုသတင်းစာတွေက ဘယ်လိုသိတာလဲ”
“ခေတ်မီထောက်လှမ်းရေးနည်းတွေ စက်ကိရိယာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ အီရန်မှာ အဏုမြူဗုံးလုပ်ဖို့ ကြိုးစားတာတို့၊ မြောက်ကိုရီးယားမှာ အဏုမြူဗုံးလုပ်ဖို့ ကြိုးစားတာတို့ကို သိနေကြတာပဲ”
“ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဆီ ယူရေနီယံ တွေ့ပြီဆိုတော့ ဒီလိုအဏုမြူဓာတ်ပေါင်းဖိုတွေ အဏုမြူဗုံးတွေလုပ်ဖို့ အခြေအနေ ပေးလာတယ်ပေါ့ ဟုတ်လား”
“ဆရာညိုပြောသလို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယူရေနီယံက အဓိကမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်မှာ စာရင်းဇယားရှိတယ်။ အချက်သုံးချက်နဲ့ ခင်ဗျားကိုရှင်းပြမယ်။ ပထမက သဘာဝယူရေနီယံကိုရဖို့ အဆင့်ဆင့် ခွဲထုတ်ရတယ်။ ဒီလိုရလာပြီးရင် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Uranium-235 ဟာ တစ်ရာခိုင်နှုန်းထက် မပိုဘူး။ ဒါကို စောစောက ကျွန်တော်ပြောတဲ့ နည်းတစ်နည်းနဲ့ ပါဝင်ကိန်းများလာအောင် လုပ်ရတယ်”
“Uranium-235 ဟာ သဘာဝမှာ သူ့ဘာသာသူ များနေတာရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား”
“မတွေ့ဖူးသေးဘူးဆိုတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုရမယ်။ ဒုတိယအချက်ကို ပြောပြမယ်။ ၁၉၉ဝ ခုနှစ် စာရင်းဇယားအရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သန့်စင်ပြီး Uranium-235 ပါဝင်မှုများတဲ့ ယူရေနီယံ ၃၄၁၇ မက်ထရစ်တန်ကို ထုတ်လုပ်တယ်။ ကနေဒါက ၈၇၂၉ တန်ထုတ်လုပ်တယ်။ ကမ္ဘာမှာ စုစုပေါင်း ထုတ်လုပ်မှုဟာ တန်ပေါင်း ၂၉၁ဝဝ ရှိတယ်။ ဒါတွေက Concentrate လုပ်ပြီးသား။ အသင့် သုံးလို့ရတဲ့ ယူရေနီယံတွေပါ”
“အများကြီးပါပဲလား။ ကျွန်တော်တို့က သတ္တုရိုင်း သုံးလေးပိဿာကို အတော်များနေတယ်ထင်တာ”
“ဟုတ်ပါတယ်။ သူတို့ကို Concentrate လုပ်လိုက်ရင် ဘယ်လောက်မှ မရနိုင်ပါ ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်မှာ ပြောရတာ စောသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်စိုးရိမ်တဲ့ တတိယအချက် တစ်ခုရှိသေးတယ်”
“လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လေးဆယ်က ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံကို အာဏာသိမ်း အစိုးရခေါင်းဆောင် ဦးနေဝင်း အုပ်ချုပ်တယ်။ သူက စစ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ ဘာမဆိုသိတယ်လို့ ထင်နေတယ်”
“ဒါကတော့ဗျာ၊ ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံကနေ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံ လုပ်သွားတာပဲ”
“ထားပါတော့၊ အဲဒီအချိန်မှာ ပဲခူးသန်းအောင်က ဦးနေဝင်းကို ရေဆင်တစ်ကောင် ကိုပေးတယ်”
“ဟုတ်ပါတယ်။ သူက ဆင်တွေကြောက်တဲ့ အကောင်လို့ မြန်မာပုံပြင်ထဲတွေမှာ ပါတယ်။ သေးသေးလေးပါ။ ဒီလိုပေးတာ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွေထဲ ပါလာသေးတယ်။ ဦးနေဝင်းက အမြတ်တနိုးနဲ့ လက်ခံပြီး ဓာတ်မှန်ရိုက်ထည့် လိုက်တော့မှာ ကြွက်ကို တွယ်ချိတ်နဲ့ နှာမောင်းတွေတပ်ပြီး လုပ်ကြံထားတာ ဖြစ်နေတယ်”
“ဆိုးတယ်နော်။ အခု ယူရေနီယံနဲ့ ဘာဆိုင်လဲ”
“ကျွန်တော်က အလိမ်တွေများ ဖြစ်နေမလားလို့ပါ။ အရင်ကတည်းက သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာနက ရှာပြီးသားပါ။ အနည်းအကျင်းပဲ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ Report ရှိတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လေ့လာခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီတော့ ဒါတွေဟာ ရေဆင်လို အညာဖြစ်နေမလား ဆိုတာပါပဲ”
“ဒီတစ်ခါ ကိုဘသစ် မှားသွားပြီး သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာဓာတ်ခွဲခန်းက စစ်ဆေးပြီးသွားပြီ။ မှန်ကန်ပါသတဲ့”
“ဒါကိုပြောတာပါ။ ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ချေကို ပြောသွားတာပါ။ ပထမအချက်က ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ ရုရှားတွေ အာဖဂန်က ပြန် ထွက်တော့ သူတို့ရဲ့အဏုမြူဘက်ထရီတွေ ကျန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ အဲဒီဘက်ထရီတွေ ထဲမှာ ယူရေနီယံတွေပါတယ်။ အဲဒီဘက်ထရီက Concentrate လုပ်ထားတဲ့ ယူရေနီယံတွေ မြန်မာပြည်ထဲကို ရောက်လာနိုင်တယ်”
“မြန်မာပြည်နဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်က အဝေးကြီးပဲ မဟုတ်လား”
“ဟိမဝန္တာတောင်ကို ကျော်လိုက်ရင် မြန်မာပြည်ကို ရောက်လာတာပဲ။ အရင်ခေတ်က စွန်ပလွန်ယိုလို သစ်သီးရောင်းတဲ့ အာဖဂန်တွေကို ကာဘူလီဝါလားတွေဟာ မြန်မာပြည်ကို ရောက်လာလေ့ရှိတယ်”
“အင်း။ သူတို့က မကြောက်မရွံ့ ယူလာတယ်ဆိုတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ”
“မှန်ပါတယ်။ အဲဒီ Concentrate လုပ်ထားတဲ့ ယူရေနီယံတွေဟာ ဂမ္မာဓာတ်ရောင်ခြည်တွေထွက်ပြီး အန္တရာယ်ကြီးတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ရုရှားကနေ တိုက်ရိုက်ခိုးထုတ်လာတဲ့ ယူရေနီယံ Concentrate တွေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ ပိတ်ဆို့ထားလို့ ယူရေနီယံ Concentrate ကို ဝယ်လို့မရဘူး။ ဒီတော့ ခိုးဝင်လာတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီလုပ်ငန်းရှင်ဆိုတာလည်း ရုရှားနဲ့ နီးစပ်တာပဲ”
“ဒါကတော့ မစွမ်းရင်းကလည်းရှိက စွန်းခင်းကလည်းညှိ ဆိုတာမျိုးပေါ့။ အဏုမြူနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာပြည်ကိုလာတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား သင်္ဘောတစ်စင်း ပြဿနာလည်း ကြားဖူးသေးတယ် မဟုတ်လား”
“ ပြန်လှည့်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သိပ္ပံကိုပြောတာပါ”
“အပြင်မှာ ဘယ်လိုလိမ်ညာချင်လိမ်ညာ သိပ္ပံကိုတော့ လာညာလို့မရဘူး။ တော်ကြာ “ရေဆင်လို အရှက်တွေကွဲမှာစိုးလို့ပါ”
ပုံစာ - ယူရေနီယံသတ္တုပါဝင်သည့် Torbernite ကျောက်ရိုင်းတုံး တစ်တုံးကို တွေ့ရစဉ် (Photo : Wikipedia)
ကိုမိုးသီး ကိုမြတ်စိုး ကိုသာကျော် ကိုအေးမင်း ဦးအောင်ချမ်း Inside Burma(Blog Contacts: ဆက်သွယ်ရန်)E-mail: wefightwewin@gmail.com
လူထု ကြွေးကြော်သံ စစ်အစိုးရ က အုပ်ချုပ်မှု ရပ်ဆိုင်းရေး လူထုအစိုးရပေါ်ပေါက်ရေး လျှပ်စစ်မီးအပြည့် အ၀ရရှိရေးလောင်စာအပြည့် အလုံအလောက်ဖြန့် ဖြူးပေး ရေအားလျှပ်စစ် ကို ပြည်တွင်းမှာသာဖြန့် ဖြူပေးလွတ်လပ်စွာရောင်းချခွင့်ရှိရေးလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ခွင့်ရှိရေးပုဂ္ဂလိက ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရေးထူးသစ်ကုမဏီက သစ်တောတွေကိုခုတ်နေတာကို ချက်ခြင်းရပ်လက်ဝါးကြီးအုပ်စီးပွားရေးကိုချက်ခြင်းရပ်ပါမစ် စီးပွားရေးအလိုမရှိ ။အသက် ၆၀ ကျော် သူတိုင်း တပ်မတော်ဦးစီးချုပ်က အနားယူပြည်သူလူထု နဲ့ တပ်မတော်သားတွေကို မြက်ခုတ်၊ ခြုံရှင်းမြောင်းတူး မခိုင်းရပြည်သူလူထုနဲ့တပ်မတော်သား မိသားစုတွေကိုလေးလေးစားစား ဆက်ဆံတပ်မတော်ကိုခုတုံးလုပ် စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ သူတို့ အမျိုးတွေကို တပ်မတော်ကထုတ်ပယ်။စက်မှု လုပ်ငန်းတွေ အတွက်လျှပ်စစ်မီးအလုံအလောက် ဖြန့် ပေးစက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းတွေကို ငွေကြေးထောက်ပံပေးမြန်မာအမျိုးသား စက် မှု လုပ်ငန်းရှင်တွေ ကိုအားပေးလိုအပ်တဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ ကိုနိင်ငံခြားမှ ၀ယ်ယူခွင့်ပေးအလုပ်အကိုင်များဖန်တီးခွင့်ရရှိရေးလုပ်ခလစာ မိသားစု လုံလောက်အောင်တိုးမြှင့်ရရှိရေးအလုပ်သမားသမဂ္ဂဖွဲ့ စည်းခွင့်ရရှိရေးအလုပ်သမားများ ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိရေးအလုပ်သမားများလုံလောက် ပြည့်ဝသော ပင်စင်ခံစားပိုင်ခွင့်ရရှိရေးအမှန်တကယ်လယ်ယာစိုက်ပျိုးသူ လယ်ပိုင်ရေးလယ်ယာမြေ ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပြုပေးလွတ်လပ်စွာ စိုက်ပျိုး၊ရောင်းချ၊ သယ်ယူခွင့်ပေးကျောင်းသားသမဂ္ဂဖွဲ့ စည်းခွင့်ပေးကျောင်းသားတိုင်း ကို ပညာသင်စာရိတ်ပေးမိမိနှစ်သာရာ ဘာသာကိုသင်ယူခွင့်ပေးအထက်တန်းအထိအခမဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်ပေးမိခင်နဲ့ ကလေးငယ်များ အဟာရပြည်ဝစွာစားသောက်နိင်ရေးမိခင်နဲ့ ကလေးငယ်များ ကျမ္မာရေး အပြည့်အ၀ ခံစားခွင့်ကိုပေးမိခင်နဲ့ ကလေးသူငယ်များကို အကြမ်းဖက်မှု မှ ကာကွယ်ပေးသက်ကြီးရွယ်အိုများကို လူမှုဖူလုံရေးလုံလောက်အောင် ပေးသက်ကြီးရွယ်အိုများကို ကျမ္မာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသက်ကြီးရွယ်အိုများကို နေထိုင်စရာ တည်ဆောက်ပေးသက်ကြီးရွယ်အိုများကို ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှု ကိုပေးသာသာရေး သာသနာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ပေး(မိုးသီးဇွန် )
1. Air Bagan ( Htoo Trading)2. Rich Gems3. Sun Tac4. Sunday Mart5. Happy Noodle6. MMS Company7. Ye Ta Gun Construction8. Rose Hill Hospital9. J & J donut10.Heritage Golf Club11. Pacific High Tech12. Taw Win Electric13. Phyu Diamond shop14. Diamond Palace Company15. Asia World Group16. Eden Group (Marina Residence)17. Kan Baw Za Bank18. Myan New Technology19. Yuzana Company Ltd. ( Also owns Shwe Nagar Min Ltd.)20. Ruby, Dragon Jade and Gems Co. Ltd